सिंहावलोकन - पछाडि
साइकोसौरसले आफूलाई परिचय दिन्छ:
म कवितापूर्वक सोच्छु र एक biofant को शिकार भएन। यी बाहिरी काल्पनिकहरू अन्धकारमा अन्तरिक्षबाट अवैध रूपमा यात्रा गर्दछन् र स्लीपरहरूको कल्पनाशक्ति उनीहरूको दिमागबाट बाहिर निकाल्छन् उनीहरूको लामो ट्रंकमा। म अन्य शब्दहरू प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदछन् जुन अरूले उनीहरूको मुखमा पहिले नै राखेका थिए। मैले त्यो बेफिक्री भेटें। यसैले म प्राय नयाँ शब्दहरू आविष्कार गर्दछु जसले समस्या सिर्जना गर्दछ जुन कसैले पनि मलाई बुझ्दैनन्। नतिजाको रूपमा, मैले फेरि प्रयोग शव्दहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ कि जर्मन भाषाभाषा केवल अशुद्ध रूपमा गठन भएको हो। भाषा बोल्न सक्दछ किनकि यसले अस्तित्वको सामान्य छविहरू राख्छ। भाषा मुख्यतया संसारको छवि को लागी एक घर दिने बारे हो। यो दुखद हुन्छ जब कुनै व्यक्तिले भाषाका शब्दहरू पछ्याउँछ र तिनीहरूलाई सोच्न लैजान्छ।वास्तविक सोचले भाषालाई आकार दिन्छ। भाषा एउटा साइकोसौरसको आई हो, यो यसको केन्द्र हो। भाषामा संसार वास्तवमा एक संसारको रूपमा जीवनमा आउँदछ, किनभने बोल्नेको अर्थ: विश्व सिर्जना गर्ने। सुरुमा यो शब्द थियो!
तिल: मनोचिकित्सकलाई भन्नुहोस्, यस पुस्तकको बारेमा के हो
साइकोसौरस: यस पुस्तकमा भाषा आफैं बोल्छ र त्यहाँ
भाषाले सबै कुराको बारेमा कुरा गर्छ, यस पुस्तकमा प्रत्येक शीर्षक छ।
ईन्टे: हामी एक व्यक्तिगत प्रश्न छ: के बीच के फरक छ
साइकोसौरस र कार्टेन?
साइकोसौरस: म त्यस बारे कुरा गर्न चाहन्न, विषय एक बोझ हो
डक: यो पुनः प्राप्त भयो, यार!
मोल: स्पष्टतः यो पुस्तक एक हो
साइकोसौरस: यो छ।
यसले अनौंठो विस्तार गर्दछ।
भाषाले एक हजार भन्दा बढी शब्दहरू भन्छ।
Kichermaus: यदि म कारस्टनलाई लेख्न चाहान्छु, उनिसँग पनि छ
एक अनलाइन वा केहि?
साइकोसौरस: अहिले योसँग ईमेल ठेगाना छ
carten-stemm@web.de र उहाँसँग आफ्नै अनलाइन पनि छ।
वे्रुल्फ: पुन: reprimat डे această carte!
गिग्गल: म एउटा शब्द बुझ्दिन, रेल स्टेशन पनि हैन।
रबे: तपाईले सबै कुरा बुझ्न जरूरी छैन। कहिलेकाँही यसबाट टाढा हुनको लागि पर्याप्त छ
शब्दहरु लाई असमर्थको माध्यम ले तपाईलाई बोक्न।
डेटलेफ डबल डोईड
डेटलेफ डोप्लेल्डियोइड दिमागको दुबै भागसँग राम्रोसँग सोच्न सक्दैन। डेटलेफले प्रकाश भन्दा छिटो सोच्दछ, जसले उसको लगोस्फेयरमा स्पेस-टाइम बढेर जान्छ। त्यसपछि ऊ दायाँ बदल्छ बायाँसँग, बाहिरबाट र सकल नेटको साथ। उसलाई थाहा छैन कि तपाईं कोठाभित्र जाँदै हुनुहुन्छ वा बाहिर हुनुहुन्छ। यो डेटलेफ डोप्लेल्डॉइडको बारेमा खराब छ: अर्को दिन उसले सोचे कि मानिसहरु मानिसहरु हुन्। डेटलेफले अल्बर्ट आइन्स्टाइन र कोनराड एडेनाउर बीचको भिन्नता पनि सम्झन सक्दैनन्। डेटलेफले आफैलाई सोध्छन्: के '' समान '' र '' समान '' समान छैन? कहिलेकाँही श्री डोपल्डोइडले लाजेस्टेनिक हिज्जे गल्तीहरू गर्दछ। यदि ऊ पूर्ण रूपले भ्रमित छ भने, डेटलेफ भविष्य पनि सम्झन्छन्।
'' जब म अबदेखि म को हुँ भनेर थाहा पाउँदिन, म मेरो परिचयपत्र हेर्छु: त्यहाँ मेरो आफ्नै नम्बर छ; सबै मेरो लागि संख्या, केवल मेरो लागि। अनौंठो र निर्विवाद। राज्यले मलाई माया गर्छ। तर के यसले मलाई कतै पाउँदछ? डेटलेफ डोपेलदोइडको नाम पछि को छ? र यस्तो सानो प्लास्टिक कार्ड के प्रमाणित गर्दछ? प्लास्टिक कार्ड फोर्ज गर्न सजिलो छ। तपाईं आज केहि पनि नक्कली गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक परिचय फोर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै खिलिरहेको छु। ''
बन्नी कुरा गर्दै
बोल्ने खरायोलाई कुरा गर्ने खरायो भनिन्छ। कुरा गरिरहेको खोर बोल्दा खाँदैछ र निब्बलिंग गर्दा बोल्छ। शब्द जरा उसलाई थाहा छैन। अहिले उसले प्रेम खान्दै छ। प्रेम उसलाई एक शब्द मात्र छ, चुपचाप, चुपचाप। एक खाए बिना प्रेम खान सक्नुहुन्छ, त्यो खरायो कुरा गर्ने को बुद्धि हो।
त्यहाँ बतखहरु छन्!
जीवविज्ञानी बतखको प्वाँखहरूमा चासो राख्दछ, दन्तचिकित्सक बतखको अस्तित्वमा चासो राख्छ। कसले बतख दिन्छ? उत्तर: यो 'यो'। 'यो' र उत्पादन प्रशस्त हुनको लागि। एक वैकल्पिक रूपमा यस प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ: विकासले बतख दिन्छ, बतखको अन्डाले बतख दिन्छ, बतख सेक्सले बतख दिन्छ, भगवानले बत्तख दिन्छ। पानी परिरहेको छ वास्तवमा एक भन्नु पर्छ: बादल वर्षा हुँदैछ। भगवान पनि यो 'यो' मा निर्भर छैनन्, किनकि यसले भन्छ: त्यहाँ एक भगवान छ। यसको फलस्वरूप यसको अर्थ छ: 'यो' परमेश्वर भन्दा ठुलो छ। अर्को निष्कर्ष यस्तो हुनेछ: 'यो' वास्तविक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले पहिले दिनुहुन्छ। हाँसाहरू छन्। तपाईं यसो गर्नुहुन्न: यसले बतख लिन्छ। दिनु भन्दा पनि धन्यको हो। दिने सम्भावना प्राप्त गर्नु भन्दा अनटोलॉजिकल पनि हुन सक्छ। 'यो'यति अस्पष्ट छ कि तपाई अब यसको कुहिर देख्न सक्नुहुन्न। नतिजा: तपाईं वास्तवमै हावा कहाँबाट आउनुभयो भनेर सोच्नुहुन्न। 'यो' भ्रामक छ। यो जान्ने नाटक गर्दछ। जब हामीलाई लामो समयसम्म बादल पर्दैछ भनेर थाहा छैन, तब 'यो' वर्षा हुन्छ। यस इन्कारेसनले पनि 'यसलाई' दिन्छ: '' एल्वेट्रित्से जस्तो कुनै चीज छैन! '' यी 'हुनसक्छ' यी गैर-बतखहरू दिन सक्ने कोण को हो?त्यहाँ एल्वेट्रिक्स जस्तो कुनै चीज छैन! '' यी को हुन सक्छन् 'यी' हुन सक्छ कि यी गैर-बतखहरू दिन?त्यहाँ एल्वेट्रिक्स जस्तो कुनै चीज छैन! '' यी को हुन सक्छ 'यी' हुन सक्छ कि यी गैर-बतखहरू दिन?
गोल्डमैरी र पेचमैरी
एक समय त्यहाँ एक प्रेरणादायक वक्ता थियो जसको दुई छोरीहरू थिए, दुबैलाई मारीको नाम दिइयो। एक मेहनती थियो, अर्को अल्छी। एक दिन मेहनती महिला फव्वारामा आईन् जसले भनिन्:
'' पिउने पानी छैन! ''
"" यो केवल कानुनी कारणले गर्दा हो, "" तिर्खाएकी महिलाले सोचे। ती केटीले पानी पिए र दुर्घटनावश इनारमा खस्यो र यसपछि उनी बेहोस भइन्। केहि बिन्दुमा उनी फेरि ब्यूँझिछिन् पूर्ण ठाउँमा उनीलाई थाहा थिएन।
एउटी बुढी आइमाई घरको झ्यालमा उभिइन् जसले मर्मत गर्नु पर्‍यो र उनको तकिया हिलाइन्। फ्राउ होले, त्यो भाडामा लिने मान्छेलाई भनिन्: `you आज तपाई जस्ता सक्षम वरिष्ठ क्यारियरहरू विरलै छन्, आज मेरोलागि धेरै काम छ। '' र कडा परिश्रम गर्ने महिला काम गर्न एकदम उत्सुक भएकोले उनले फ्रू होलेको लागि गृहकार्य गरिन्।
तर केही समयपछि ती केटी घरमै बस्छिन् र घर फर्कने इच्छा व्यक्त गर्छिन्। फ्रेयू होले उनलाई यो अनुरोध प्रदान गर्‍यो। ती वृद्ध महिलाले केटीलाई एउटा ढोकामा पुर्याई जहाँबाट उनी जानु पर्ने थियो। मेहनती महिला ढोकाबाट हिंड्दै जाँदा, उनको माथिबाट डाइअक्सिन-दूषित पिचको साथ वर्षा भयो जुन अब उनको छालाबाट बाहिर आएको छैन। केटीले भनिन्: '' कमबख्त बुलशिट! म भाग्यमा कडा बदला लिन्छु। म गणित पढ्दै छु र प्याराडक्स सिद्धान्तहरुमा मेरो डॉक्टरेट गर्दैछु। ''
जब उनकी आमाले उनको छोरीलाई नचिनेको देखे, उनले आफ्नो छोराको नाम पेचमेरी राखे। सामाजिक सन्तुलनका कारण, आमाले अब आफ्नो अल्छी छोरीलाई पनि इनारमा पठाइन्। लगभग त्यस्तै भयो। केवल, फ्रु होलेको घरमा जानुको सट्टा, उनकी दोस्रो छोरी अर्को घरमा आइपुगे जहाँ एउटा निश्चित फ्रू हेले बस्ने गर्थिन्।
दस मिनेटको रोजगार पछि, अल्छी केटीको काम अनुशासनमा ढिलो भयो। सुश्री नरकले भनिन्, your your तपाईंको उमेरमा म पनि धेरै अल्छि थिएँ। मसँग माध्यमिक विद्यालय डिप्लोमा पनि छैन। हामी अब साइटा माउटन-रोथस्चिल्ड १ 45 .45 मा दौडिरहेका छौं, जुन मेरो ज्वाईले आफैंले चोरी गर्यो।
भाग्यवस पूरै तहखाने यसमा भरिएको छ। '' एक हप्ता लामो पियक्कडको पिउने पछि, अल्छी पनि घरगुनी भयो र घर छाड्न चाहान्थ्यो। फ्रु हेले तिनीहरूलाई पेचमरी भएर पार गरेको गेटमा पु led्याए। अल्छी केटी ढोकाबाट हिंड्दै गर्दा, उनमा सुनको वर्षा भयो। अब केटी धेरै बहुमूल्य थियो किनकि सुनलाई पनि हटाउन सकिएन। जब उहाँ घर पुग्नुभयो, उनकी आमाले उनलाई गोल्डमैरी भनिन्। जीवनमा अन्याय भएकोमा एकदमै क्रोधले गर्दा आमाले चर्च छोड्नुभयो र धर्मनिरपेक्ष निर्णयको लागि जानुभयो। पछि पेचमरी उनको अनुहारमा डाइअक्सिन दागहरूका साथ तर्कको पहिलो प्रोफेसर बन्नुभयो। तिनीहरूको जीवन पूर्ण रूपमा बोचेको थियो। गोल्डमैरी यद्यपि उनको जीवनको अन्त्यसम्म खुशी र सन्तुष्ट भइन्। > खुशीको अन्त्य
गोठालो: मलाई भन, तपाई कस्तो किसिमको किताब तपाईको बाहुमुनि राख्दै हुनुहुन्छ?
वोल्फग्या:: तपाईको भेडाहरू मध्ये एकले मलाई मेरो जन्मदिनको लागि पुस्तक दिए। यसको शीर्षक हो: भेडाको चीज आफै आफैं बनाउनुहोस्!
गोठालो: के यो एक मजाक हो?
वुल्फग्या:: चुटकुले यो संग कपडा गर्नु हुँदैन। म कहिल्यै ठट्टा गर्दिन जोसुकै जो ठान्छ केवल ब्यान्डर मतलब व्यवसायको लागि। मैले कहिले पनि ठट्टा गरेन। र यदि कोही हाँस्छ भने, म त्यस गधालाई मुखमा छिर्नेछु।
भेडा: माफ गर्नुहोस् यदि मैले हस्तक्षेप गरेमा, तर म आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित छु, त्यसैले म कुरा गर्न सक्दछु। के त्यहाँ भेडा चीजमा चाँडै नयाँ कर छ?
अर्को भेडा: म पनि सृष्टिकर्ताले आनुवंशिक रूपमा ईन्जिनियर गरिएको उत्पादन हुँ, र म तपाईंलाई भन्छु: पुरुष महिला जस्ता छन्, अन्यत्र मात्र ।
वोल्फग्या:: मैले सँधै यो सोचे
गोठालो: म यस्तो जटिल कुराकानीबाट सधैं चक्कर आउँछु। .. आह, हेर जो आउँदै छ! ऊ लimp्गडो छ!
वोल्फग्या:: त्यसो भए यो तुलना मात्र हुन सक्छ।
गोठालो: किन यो?
वोल्फग्या Because: किनकि सधैं एक जना भन्छ: हरेक तुलना ल l्गडो छ!
एक काटेको भेडा: अर्थ सँधै अस्पष्ट छ। त्यसोभए वक्ताले आफ्नो भाषणमा छिटो प्रतिज्ञा गर्छन। डबल जर्मन एक ल्याप्सस फ्राउडियानिकस हो, चुहावट सबै पनि सहज स्व-प्रस्तुतीकरणमा।
वोल्फग्या:: कस्तो प्रकारको वक्ता हो?
गोठालो: भेडाहरूले अध्ययन गरे। मनोविज्ञान वा केहि।
(लimp्गडो मानिस अब छलफल समूहमा पुगेको छ।)
लिम्पि:: तिनीहरू म पछि छन्। मेरो व्यापार चोरी
रूसी आणविक उर्जा केन्द्रहरूबाट प्लुटोनियम उडाइसकिएको छ!
शेफर्ड: केहि नगर्नुहोस्, ओट्टो!
भेडा: तपाई प्लुटोनियम खान सक्नुहुन्छ?
गोठालो: सबै भेडाले अध्ययन गरेका छैनन्!
सबै भेडाहरू सँगै: Mhhhh!
ओटो: मसँग एउटा मात्र तरिका छ: आत्महत्या!
वोल्फग्या:: मसँग वैकल्पिक मार्ग छ। मलाई सर्कसमा राम्रो विजार्ड थाहा छ। ऊ एलर्जीबाट ग्रस्त छ, तर प्राविधिक त उनी ठीक छ।
ओटो: यो जादुगर को हो?
वोल्फग्या:: उहाँ सबै कुरा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँसँग धेरै छ
प्लूटो सहित सातौं घर मा ग्रहहरु।
ओटो: म ज्योतिषमा विश्वास गर्दिन!
वोल्फग्या:: तर ताराहरू तपाईंलाई विश्वास गर्छन्!
ओट्टो: ठीक छ, म प्रयास गर्न चाहन्छु, किनभने मसँग हराउने केहि पनि छैन। म आफूलाई खरायोमा मोहित हुन दिनुहोस् र मेरो नाम पछाडि लेख्नुहोस् ताकि कसैले मलाई चिन्दैन।
शेफर्ड: राम्रो कुरा! अब त्यो साँच्चिकै खुसीको अन्त हो!
आवश्यकताको समयमा स्याउले नाशपाती खान्छ।
बाँदर: शुभ दिउँसो, तिरछा आँखा, तपाइँको तिरछा आँखा छन्।
ओब्लिक आँखाहरू: र तपाईं एक बन्दर हुनुहुन्छ, तपाईं बन्दर।
बाँदर: मसँग यहाँ डायनामाइटको एक स्टिक छ।
हामी यी गधालाई कसले समातिरहेका छौं?
ओब्लिक: म अवश्य! म TNT लाई होईन भन्न सक्दिन!
तपाईं शानदार बाँदर, तपाईं नोबेल पुरस्कार पाउन योग्य हुनुहुन्छ!
(बाँदरले स्लेन्टको गधा माथि डायनामाइट हाल्छ र फ्यूज प्रज्ज्वलित गर्दछ। स्नायु-ब्रेकिंग सेकेन्डको पर्खाइ पछि, एउटा हिंस्रक विस्फोटन हुन्छ: धुलो, मलबे र मासुका अवशेषहरूले विस्फोट हुने ठाउँ छोप्दछन्।)
बाँदर: महान! यो दुर्घटनाग्रस्त भयो!
हाम्रो लागि जनावरहरू कुनै गणना वा अनुच्छेद छैनन्।
अब एक केरा पहिले खाइन्छ। हाहा!
एक पटक त्यहाँ एउटा सानो स्केकी कार थियो जुन मोटो र हल्का प्रकृतिबाट बग्दछ। कार्ट चलिरहेको छ, यसलाई घोडाले तानिरहेको छ। एक सवारी जो अब आज ड्राइभ गर्दैन। जब गाडीहरू इञ्जिनले चलाउन थाले, कार्ट स्टिलमा परिणत भयो, जब कार्ट अझै तानियो, फूलहरू फूले र पानी पनि सँगसँगै दौडियो। जीवनको रहस्य मिल चक्रमा बस्‍यो, यहाँ पा wheel्ग्रा पानीमा बग्यो। अटोमोबाइल स्टील केटीको जन्म थियो। आकाश तानिन्छ, आकाश तानिन्छ, यो उत्साहित छ। Stahltussi एक रक्षा तोप संग आकाश मा गोली मार। यो पहिलो विश्व युद्ध हो, इस्पातले फेरि घोडा बन्ने व्यर्थ प्रयास गर्यो। Stahlbussi अब एक घोडा आफैं हो, कि किनकी उनी पोनीटेल लगाउँछिन्। घोडाहरू साँच्चिकै सुन्दर छन्,जस्तो भव्यता अब इस्पात को युग मा परिचित छैन। प्लास्टिक पनि इस्पात हो। घोडाले तान्न नसक्ने कुनै पनि चीज स्टील हो। तपाईं एक सौन्दर्यकोमा चकित हुनुहुनेछ जुन फेसन पुतल होइन।
बहु कोठा एउटा कोठा हो जुन बाहिरको भन्दा ठूलो हुन्छ। बहु अलमारी, उदाहरण को लागी, साधारण बेडरूम अलमारी जस्तो देखिन्छ। तर यदि तपाईले कपाटमा लुकाउनु पर्छ भने आवश्यक छ भने, कपाटमा सम्पूर्ण आकाशगंगाहरू छन् भनेर थाहा पाउँदा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। र यी अक्सिजनको कमीको परिणाम स्वरूप भ्रम होईन। विश्व वास्तविकतामा प्वालहरू भरिएको छ। र त्यहाँ अधिक र अधिक छन्।
खतराले तपाईंलाई धम्की दिन्छ। दुर्घटना अहिलेसम्म टकराएको छैन। तर यो भविष्यमा हड्ताल सक्छ; त्यो जोखिम हो। जीवन असुरक्षित छ। तपाईलाई थाहा छैन अर्को क्षणमा जीवन बर्बाद हुनेछ वा हुँदैन। खतरा केवल कुनाको वरिपरि छ, खतरा अप्रत्याशित छ, यो एक सपना मा बदलिन सक्छ। शिकारीहरू खतरनाक हुन्छन्; पूंजीवादीहरू पनि। पानीले भरिएको टबमा पावर केबल्स राख्नु खतरनाक छ। विवाह गर्नु पनि जोखिमपूर्ण छ। अर्कोतर्फ जीवन बीमाले सुरक्षाको प्रतिज्ञा गर्छ: यदि तपाईंले जीवन गुमाउनुभएको छ भने, तपाईंलाई नयाँ फिर्ताका लागि प्रतिफल दिइनेछ। तर बीमा धोखाधडीबाट सावधान रहनुहोस्: बीमा कम्पनीहरूले तपाईंलाई धेरै धोका दिन्छन्!
सोचाई अर्थको देशमा भटकन्छ। सोच्ने तरिकाहरू ज्ञानको जंगलमा जान्छन्। उसको भद्रताले सोचलाई कडा बनाउँछ र अन्ततः उसको सोचेको रूखहरू र सपनाको हिउँसँग मर्ज गर्दछ।
फ्रेडले ओलम्पसमा सेलफोनको साथ देवता देख्छन्।
फ्रेड: हेलो, भगवान!
जबदेखि देवताहरूले सेल फोन प्रयोग गर्दै आएका छन्?
भगवान: हो, तपाईं मात्र अनुकूल। म मेरा सहकर्मीहरूसँग टेलिपेथिक रूपमा कुराकानी पनि गर्न सक्दछु, तर हामी ईश्वरहरू मान्छेहरूका लागि बुझ्ने बनाउन चाहन्छौं।
फ्रेड: ठीक छ, मैले बुझें!
मस्तिष्क वाँकरहरू न्यूमस्टिक आक्रमकको खरायो हुन्। तिनीहरूलाई अण्डाको टाउको पनि भनिन्छ। तपाईंको न्यूरोलान्टेन धेरै लचिलो छैन, तर धेरै लामो। भाँडाका अखरोटहरू उनीहरूको टाउकोमा टाउकोमा हिर्काउनु पर्छ किनभने तिनीहरूमा मस्तिष्क फ्याट धेरै हुन्छ। न्यूरोलान्टेन दिमागको डन्डी हुन्। न्युरोलान्टेन रूखहरूको हाँगाहरू पनि हुनसक्दछ, जसको माध्यमबाट कसैले अब उप्रान्त सबै रूखहरूको लागि वन देख्न सक्दैन। तर वास्तवमा न्यूरोलान्टहरू आध्यात्मिक सुशी खानको लागि चोपस्टकहरू हुन्।
केही दिमाग वाँकरलाई दार्शनिकहरू भनिन्छ। दर्शनले आत्मिक रक्सी बिना सोच्दछ, यो प्रेम बिना प्रकाश हो। ज्ञानको मरूभूमिमा, विचारकले नराम्रा ठट्टा गर्न सक्छ। Cacti कहिल्यै हाँस्न। दर्शन को विचार पुरानो चीज जस्तै कडा छन्। उपचारको मार्गमा दार्शनिकहरूले कविता लेख्न थालेका छन्।
फ्रेड: तपाईलाई थाहा छ डेटलेफ के हो, मलाई डेमिडगोडमा पदोन्नति गरिएको थियो।
फ्रेड: यो छ! म अब कुनै पनि प्रश्नको उत्तर भेट्न सक्छु, यदि केवल सही मात्र भए, तर म उत्तर पत्ता लगाउनेछु।
डेटलेफ: कसले तिमीलाई पदोन्नति दियो?
फ्रेड: बिग बॉस!
फ्रेड: म केवल demigod हुँ। म अहिले अमर छैन, तर म यसमा काम गर्दैछु।
डेटलेफ: Mm, त्यो गर्नुहोस्।
फ्रेड: उदाहरणका लागि, मलाई अन्त्यमा थाहा छ किन केरा टेढो छ।
डेटलेफ: हो, किन?
फ्रेड: उनी एकताका लागि चाहान्छिन्, केरा फेरि स्वर्गमा जान चाहान्छिन्, उनी सर्कल बन्न चाहान्छिन्, तर मानिसको पतनले उनलाई त्यसो गर्नबाट रोक्दछ, उनको शक्ति केवल वक्रतामा पुगेको छ।
डेटलेफ: डेमिडगोडलाई के थाहा!
शब्द `ost प्रेत '' एकदम एक्लो शब्द हो। शब्द यति धेरै वर्णन गर्न छ। बुद्धिमत्ता चप्स ढु stones्गाहरू; दिमाग जोड्दछ। आत्माले सूर्यको जस्तो संसारको भागहरू रोशन गर्दछ र तिनीहरूलाई एक आकार दिन्छ। दिमाग भनेको चीजहरूको लागि तस्वीर हो। आत्माले सानोभन्दा सानो कणलाई बढी लगाउँछ। दिमागले सोच्न सक्छ, बुद्धिले मात्र सोच्न वा संयोजन गर्न सक्दछ।
कारण र प्रभाव
बिलियर्ड खेलाडीले आफ्नो स्टिकको साथ बल खेल्छ, जुन अर्को बलमा हिट हुन्छ। यो कारण र प्रभाव सोचाइ विज्ञान को आधारभूत तर्क हो। तर्क मात्र स्थापना, यो केहि व्याख्या गर्दैन। बिलियर्ड खेलाडीको स्वतन्त्र इच्छा यस विश्व दृश्यमा पूर्ण रूपमा लुकेको छ। कारणहरू सुस्त पशुहरू हुन्, लगभग साँढेहरू। कारणले ऊर्जा मार्फत विश्वस्त गर्दछ, अर्थको माध्यमबाट होइन।
फ्रेड: म तर्क मा विश्वास गर्दछु। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तार्किक ढured्गले संरचना गरिएको छ। यद्यपि महिलाहरू ब्रह्माण्डको अंश छैनन्। तार्किक सोचले तपाईंलाई कुनै पज्जल नटमा पुग्न अनुमति दिन्छ। तपाईले सोच्न मेहनत गर्नुपर्छ।
अर्नोल्ड हेटर्मन: तर्कले हामीलाई ज्ञानमा बढि प्राप्त गर्दैन। उदाहरण: त्यहाँ बारमा तीनवटा काँगा छन्। एउटा चरा किलर आउँछ र एउटा चरालाई गोली हान्न थाल्छ।
अर्नोल्ड: अहिले बारमा कति चराहरू बसिरहेका छन्?
फ्रेड: फेन्समा अझै दुईवटा कौवा बसिरहेका छन्।
अर्नाल्ड: गलत! त्यहाँ बारमा अझै का crow्गा रहेको छ!
फ्रेड: यो पूर्ण तार्किक छ!
अर्नाल्ड: यो तार्किक छ। शट चरा भुँइमा मरे। दोस्रो काग ठूलो स्वरले चकित भयो र तुरुन्तै उड़्यो। तेस्रो कागलाई ब्या bang्गले पक्षाघात गरेको थियो र बस्न सक्ने एउटै मात्र चरा हो।
फ्रेड: यो केस मेरो लागि धेरै निर्माण भएको देखिन्छ, तर यो तार्किक छ।
अर्नाल्ड: ठीक छ, तर्कले सबै कुरा र केहि पनि वर्णन गर्न सक्दछ।
फ्रेड: विशेष गरी हिन्डसाइटमा।
अर्नाल्ड: हो, सधैं पछि।
यद्यपि त्यहाँ वास्तविकता पहिले नै थियो।
फ्रेड: के हुन्छ भने शट पछि अचानक पाँचवटा काँडा फेन्सनमा बसिरहेका थिए?
अर्नाल्ड: त्यसोभए आत्महत्या गर्ने काकहरू पनि गोली हानि गर्ने आशामा बसेका थिए।
फ्रेड: यो तार्किक के हो त्यो साँच्चिकै महान हो।
अर्नाल्ड: तपाईं तर्कसंगै सबै कुरा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तक कि अयोगिक पनि।
फ्रेड: मानिस, मानिस, म वास्तवमै यसको बारेमा सोच्नु पर्छ।
अर्नाल्ड: तर कृपया कडा तार्किक रहनुहोस्!
फ्रेड: ओह ... हो ... राम्रो ...
सुकरात: आजको बिहान तपाई कस्तो प्लेट जस्तो देखिनुहुन्छ?
प्लेटो: चुप लाग्यो, गधा!
सुकरात: तपाई केवल संवादको लागि सक्षम हुनुहुन्न!
गोली आफैमा डरलाग्दो संकुचित हुन्छ। यो प्रज्वलित भएको खण्डमा जन्म दिन चाहन्छ। तर कोही पनि तिनीहरूलाई प्रज्वलित गर्दैन। बल माटो जस्तै सुस्त रहन्छ र एक अर्कालाई थाँहा हुँदैन। बलहरू किन घुम्दै छन्? तिनीहरू मार्गमा रोल हुन्छन्, तर प्रक्रियामा तिनीहरूको आकार परिवर्तन गर्दैनन्। अन्तमा, तिनीहरू आन्दोलनद्वारा रोल गरिनेछ। गोलाइ क्षेत्र नै रहन्छ। अब यो मलाई फेरि देखा पर्छ: बुलेटहरू पोथी छन्!
कुकुर नै कुकुरको विचार हो। के कुकुरको विचार ड्याचसन्ड, गोल्डन रिट्रिभर, भेडडग, वा पोडल जस्तो देखिन्छ? हामीलाई थाहा छ सर्कल कस्तो देखिन्छ। त्यहाँ केवल एक सर्कल छ र यो पूर्ण गोल छ। त्रिभुजको साथ पनि यो अझ गाह्रो हुन्छ: त्रिकोणको विचारसँग कुन कोण हुन्छ? सर्कल केवल विचार हो जुन पिनपोइन्ट सटीकताको साथ चित्रित गर्न सकिन्छ। कुकुर आफैंले तान्न सक्दैन, केवल एक विशिष्ट कुकुर। सर्कल आफैं तान्न सकिन्छ। के हामी सर्कलको पूजा गर्छौं? के त्यहाँ "आफैमा" पनि छ? कुराहरु केवल "मेरो लागि" देखाईन्छ? - वास्तविकता मा सही जीवन को लागी धेरै अपूर्ण हुनेछ। जीवनलाई वृत्तको कुनामा वा वर्गमा प्वाल चाहिन्छ। उत्तम केवल एक विचारको रूपमा अवस्थित छकिनभने वास्तविकतामा सिद्ध अस्तित्व हुन सक्दैन। जीवनको पूर्णतामा सर्कलमा कुनाहरू हुन्छन्। चेस्टनट एक वर्ग बल हो। यो सिद्ध जीवनको रूपमा त्रुटिपूर्ण पूर्णतामा फलदायी हुन्छ। जे भए पनि, एक दाँत बिरामी छ। किन यो? केवल हेजहोगलाई थाहा छ!
सर्कलले सास फेर्न सक्दैन। उहाँसँग सास फेर्न कुनै प्वाल छैन। सर्कल आफै पनि प्वालको रूपमा देख्न सकिन्छ। के सर्कल अर्को विश्वको प्रवेशद्वार हो? म त्यसलाई पुन: जाँच गर्न सक्दिन किनभने सर्कलले मलाई भित्र जान दिदैन। यो केवल धेरै लक छ। तपाईले त्यस्ता मान्छेहरूसँग गडबड गर्नु हुँदैन। सर्कलले मसँग कुरा गर्दैन, यो सँधै रहस्यमय रहनेछ। सर्कलमा सायद लुकाउन केहि पनि छैन: यो भोली, बोरिंग र खाली छ। - गोलो घेराको रंग हो। यो रंग धेरै दुर्लभ छ र यसको नाम छैन। र name्गलाई नाम दिने सजिलो तरीका भनेको `` रंगीन '' हो। राउन्ड सर्कल वा चाप बिना साहसिक कार्यमा जान सक्छ। एउटा रोमाञ्चक जीवन नै हो। आज सबैले केहि नयाँ सोच्छन्। तर गोल यति पुरानो होनयाँको उसको सोचले पागलपन कहिल्यै उत्पन्न गर्न सक्दैन। यद्यपि philistines कहिलेकाँही ब्यापारको साथ गडबड गर्दैन। यसको लागि यो एकदम तातो छ। राउन्ड सर्कल बन्न चाहान्थ्यो र रोजगार एजेन्सीलाई पुन: तालिमको लागि सोध्यो। लिपिक एक वर्ग थियो। यो नराम्ररी अन्त्य भयो।
स्याउ सोच्छन र नाशपाती steers।
हिटि aw अद्भुत छ
हिट त्यहाँ सबैभन्दा सार्वभौमिक क्रिया छ। हिटि really साँच्चै अद्भुत छ। यो गतिविधि ढु already्गा युगमा पहिले नै पूर्ण विकसित भइसकेको थियो। तपाईं आफ्नो आँखा, एक पुस्तक पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। शब्दकोश हेर्नुहोस्, विन्डो प्रहार गर्नुहोस् वा कसैको अनुहारमा हिर्काउनुहोस्। संगीतकारहरूले ड्रमका साथ आवाज निकाल्छन्। प्रहार तपाईंलाई हिट पहिलो एफसी मेनिस्कसले रोजेनहिमको सपाट खुट्टा २: १ सँग पिट्छ। जसले हराउँछ उसले जित्छ। एक ढु stones्गा संग राम्रो हिट गर्न सक्छन्। महान ढु stone्गालाई हतौडी भनिन्छ। आफैमा हिट कच्चा र अप्रिय छ। एक झटका मूर्ख र आणविक हो। हिर्काउने प्रहारहरू, ध्वंसहरू, अलग पार्नेहरूलाई हिट गर्दै। कुट्ने बच्चालाई काट्ने भनिन्छ। नराम्रो बच्चा कुट्ने अर्को बच्चालाई पुशिंग भनिन्छ। यो बच्चा अधिक व्यक्ति छकिनकि यसको अगाडी बढि सूर्य छ। हिटि aले मुट्ठी बनाउँछ, यसले पेटलाई के दिन्छ।
एउटा काम कोष भनेको सबै व्यक्तिको अन्तिम अनुभवको निक्षेप हो। त्यहाँ अनुभव छ जुन यति निश्चय गरिएको छ कि यो खजानाको रूपमा खडा गरिएको छ। एक चुम्बकीय क्षेत्र जस्तै, काम को खजाना आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट सबै प्राणीहरू orient। वर्क्सकट्ज जीवनको प्राकृतिक विकिपेडिया हो। दुर्भाग्यवश, ज्ञानको खजानामा कालो भेडाहरू पनि छन्: तिनीहरूलाई Werkschmutz भनिन्छ।
राजा ओर्थोसको लागि, सत्तारूढ हुनुको मतलब चीजहरूलाई उनीहरूको भित्री प्राणको अनुसार व्यवस्थित गर्न दिनु हो। ओर्थोसले मान्छेमा आफ्नै इच्छा हस्तान्तरण गर्दैन। राजा चीजहरू जबरजस्ती गर्न चाहँदैन, बरु उसले तिनीहरूको विचित्रताहरूको खोजी गर्छ र तिनीहरूलाई आफै व्यवस्थित गर्न दिन्छ। व्यक्ति, बाख्रा र अन्य प्राणीहरू ओर्थोको राज्यमा बस्छन्, सबै जना उभिन्छन् र तिनीहरूको उचित ठाउँमा हिड्दछन्। उनको मृत्यु पछि, राजा ओर्थोस आफ्नो मनपर्ने नदीको पानीमा विलीन हुनेछ, जुन अन्तमा समुद्रमा खस्छ। समुन्द्रबाट, उनको काम मान्छे उन्मुख गर्न को लागी जारी रहनेछ।
भोक र तिर्खा
भोका सधैं खान चाहन्छ। भोक पूर्ण रूपमा इच्छाको वस्तुमा निर्भर हुन्छ। तर वास्तवमा यसले भोकलाई यति आकर्षक बनाउँछ। ऊ जीवनको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छ, केहीले यो अफवाह पनि गर्दछ कि ऊ जीवन हो। तर त्यो केवल धेरै पागल केटा लागि हो।
आवश्यकता भनेको भोक र तिर्खाको अमूर्तता हो। आवश्यकता गरीब छ र आवश्यकता छ। आवश्यकता धेरै सांसारिक हो र सधैं खैरो देखिन्छ। आवश्यकताहरू कुनै पनि तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ। कहिल्यै काम गर्दैन, यो सधैं दुबै रहन्छ। यदि तपाईंलाई केहि चाहिएमा, तपाईं किनमेल गर्न जानुहुन्छ।
डाईटरी फाइबर को आवश्यक छ? विशेष गरी जब तिनीहरू केवल गिट्टी समावेश गर्दछन्। लोडरहरू लोड गर्नुहोस्। तिनीहरूले शून्य भर्छन्, तर आफै खाली रहन्छन्। यो चमक छ कि सार छ।
साइकोसौरस पूर्ण रूपमा समाप्त भयो:
हिउँको उर्जाले यसको हात उठाउँदछ। चिसो अनुहारबाट पानीको बाढी तल झर्छ। छाया महिलाको आँखा रात मा दुई सूर्य जस्तै चम्किन्छ। तर लामो समयको लागि होइन। तपाईंको बत्तीहरू सकियो। छाया महिला एउटी कालो परी आकाशमा उडन्छ। अज्ञात ठाउँ अनाथ छ। जहाँ कोही अहिलेसम्म आएका छैनन्, त्यहाँ अहिले कोही पनि छैन। नहुनुको मेरो ज्ञान खाली स्थानको छेउमा छ। म न्यानो छु, तर मात्र तापको रूपमा, किनकि मसँग अरू शरीर छैन। जिब्रो बिना चिच्याएको खाली ठाउँ वरिपरि हतारिन्छ। जताततै खाली शून्यता छ, जहाँ केहि वास्तवमा हुनुपर्दछ। जहाँ केहि छैन, तपाईं केहि देख्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी यदि तपाईंको आँखाहरू छैनन्। तर म त्रास देख्छु र मलाई किन थाहा छैन।
एउटा प्वालले बरु गोल अभावलाई जनाउँछ। प्वालहरू खाली छन्। प्राय जसो प्वालमा प्वाल भनेको भित्रबाट बाहिर जान्छ। कहिलेकाँही दृश्य भित्ताबाट बाहिर जान्छ र दृश्य प्वाल प्वालबाट भित्र आउँछ। प्वालहरू भोकाएका छन्, तिनीहरू भर्न चाहन्छन्। सबैको आग्रह संतुष्ट हुनु हो। वास्तविकतामा प्वालहरू छन्। यी यति पारदर्शी छन् कि कसैले पनि उनीहरूलाई देख्न सक्दैनन्, भौतिक शरीर विशेषज्ञलाई पनि होइन। लुगाको अभाव नग्न मानिसहरूमा देख्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, गिलासको अभाव, भोक र अदृश्य रहन्छ। सतह खाली हुन्छ। यदि यो शून्य भरिएको छ भने, सतह चाँडै हराउँछ, पातलो हुन्छ। एस्थेटले सतहमा रंग लेख्छ ताकि यसले अधिक आत्म-विश्वास प्राप्त गर्दछ।
क्लासिक जनावरको चार खुट्टाहरू हुन्छन्, "म्याउज" वा यसले भौंक्छ। जनावरको अवधारणा धेरै जीवहरूको लागि एक प्रकारको शब्द हो जुनसँग थोरै समानता हुन्छ। जनावरहरूको पात हुँदैन, र तिनीहरूले आणविक बमहरू बनाउन सक्दैनन्। जनावरहरू पिछडिएका व्यक्ति हुन्। यद्यपि: एक दिन जनावरहरूले Geldel को अपूर्णता प्रमेय बुझ्नेछन्। - तर कहिले?
प्रकृति कच्चा र अप्रिय हुन सक्छ। सपना देख्नेहरूको प्रकृति पनि छ: यो प्रकृति मानिसको पतन हुनु अघि नै मानिसहरुको स्वर्ग हो। जर्मन चार्ल्स डार्विनको प्रकृति यस्तो देखिन्छ: झन झन बलियोको विरूद्ध लड्न। हाम्रो दोस्रो प्रकृति संस्कृति हो। हाम्रो तेस्रो क्षेत्र कृत्रिमता भनिन्छ। कोही पनि त्यहाँ बस्न मन पराउँदैनन्।
स्वीडेनको एक विदेशी शक्ति सबैभन्दा चिसो बरफबाट बनेको छ। यो शक्ति Eisblume नामको पुरानो केटीको रूपमा पृथ्वीमा जान्छ। बरफले बनेको फूल, सुन्दर फूल। फूलहरू वसन्त ofतुको सम्झना गराउँदछन् किनकि यो त्यस्तो समय हो जब ताजा फूलहरू सामान्यतया युवा तापक्रममा खिलछन्। हाम्रो बरफको फूल, तथापि, जाडोको भयंकर चिसो मा खिल्यो। सबै अन्य व्यक्तिहरू, जो बरफबाट बनेका छन्, बरफको फूलले टाढा लगिन्छ। अग्निस पनि चिसोबाट बनेकी छिन्, उनी जलिरहेको बरफबाट बनेकी छिन्। एग्निसले इज्ब्ल्युलाई देख्दछन् र उत्साहित छन्। फ्रिगिडहरू जहिले पनि तातो हुन्छन्। आइसक्रिमको बिक्रेताको रूपमा, श्री Sumpfstein एक आश्चर्यजनक छ। उसको बरफका बलहरूमा विष्फोटकहरू हुन्छन् जुन उनी पहाडहरूमाथि पुगे पछि प्रज्वलित हुन्छन्। इइसब्ल्यूले श्री। स्म्पफस्टीनलाई देख्छन्: उनी चकित भइन्,रूलेट बल उनको टाउको मा रोलिंग छ। कसैलाई थाहा छैन बल १ seven को डिब्बामा स्ट्याटलमा आउनेछ। अग्निस संग यो तीन हुनेछ। आइस बल वा रूलेट बल, बलहरू सबै एक समान छन्। बुलेटहरू भाग्यको खराब बैंक हुन्। र अब हामी यस बैंकमा प्रवेश गर्दैछौं र पागलपन मुक्त गर्दैछौं। सबै पूर्ण पागल छन्: आइस्ब्ल्यूम, अग्निस र श्री सम्म्पस्टेन एकै बक्समा सँगै छन्। तपाईं पागलपनमा सास लिनुभयो: अहो, यो राम्रो छ। तिनीहरू अन्तमा स्वतन्त्र छन्!अग्निस र श्री Sumpfstein एक बक्स मा सँगै छन्। तपाईं पागलपनमा सास लिनुभयो: अहो, यो राम्रो छ। तिनीहरू अन्तमा स्वतन्त्र छन्!अग्निस र श्री Sumpfstein एक बक्स मा सँगै छन्। तपाईं पागलपनमा सास लिनुभयो: अहो, यो राम्रो छ। तिनीहरू अन्तमा स्वतन्त्र छन्!
रगत मोटो र शक्तिशाली गर्मी को रूप भित्र भित्र बग्दछ। मानव रगत धेरै व्यक्तिगत छ जबसम्म यो अझै पनि उसको नसामा घुम्दछ। रक्त सर्कल, त्यसैले यो गोलो छ। रगतले उसको घेरालाई बलियो पार्छ। चिसो र हृदयविहीन मेडिकल सिरिन्जमा बाह्य रगत पहिले नै मरिसकेको छ। कस्तो भयानक! केवल सरीसृपहरू चिसो रक्तस्राव गर्दछ। जबसम्म सूर्य सरीसृपको हरियो फरमा चम्किदैन। प्रत्येक पिशाचलाई थाहा छ कि जब चन्द्रमा चम्किन्छ, रगत कालो हुन्छ। तपाईं दिनको समयमा केहि देख्न सक्नुहुन्न।
उग्र ज्वालाको साथ आगो नाच। जंगली जलिरहेको ईन्धन को स्थायित्व नष्ट गर्दछ। कोठामा तातो स्पाइक पोक हुन्छ, ज्वरोको दाँतले आफूलाई टोक्छ। रातो आँधीबेहरीको बलले वरपरको वातावरणलाई न्यानोपन दिन्छ। आगोको भट्टीहरू खरानीमा मर्छन्। आगो प्रभावशाली छ, तर यसले ईन्धनबाट यसको पदार्थ लिन्छ। उसको खाना पकाएको भन्दा छिटो खाईन्छ, धेरै छिटो। आगोको न्यानोपन अमरत्व को ठाउँमा फ्लफिल सुते। जब तातो पागल हुन्छ, यो तातो मा बदलिन्छ।
सामान्य अनुहार को रूप मा आवश्यक देखाउँछ। विशेष चीजले धेरै स्पष्ट किनारहरू देखाउँदछ। सामान्य जताततै उही हुन्छ, यो प्रायः उही तरीकाले व्यक्त गरिन्छ। सबै चीजको परिदृश्यमा, सामान्य सबै ठाउँमा पाउन सकिन्छ। सामान्यको खैरो काकालाई औसत भनिन्छ। सामान्यलाई विशेषसँग समायोजन गर्नुपर्दछ, जसले तनाव सिर्जना गर्दछ। सामान्यले सुरक्षा दिन्छ जब तपाईं अपरिचितमा छुट्टीमा जानुहुन्छ।
स्थायी छायाँ जहिले पनि उभिरहनुपर्दछ, जहाँ यो चाहानुहुन्छ जान सक्छ। यदि खडा छायाँ सर्न चाहन्छन् भने वातावरण उसको सट्टामा विगतको गतिमा अघि बढ्छ, ऊ आफैं रोकिन्छ। त्यसो भए स्थायी छायाँ सर्न सक्दछ र अझै पनी एकै ठाउँमा सदाका लागि रहनु पर्छ। स्थायी छायाको कुनै कम्पनी छैन। अवश्य त्यहाँ अन्य स्थायी छायाहरू छन्, तर तिनीहरू कहिँ छन्।
पथले लक्ष्यमा पु leads्याउँछ जबसम्म कुनै ईस्टोरिसिस्ट यसमा हिंड्दैन। एक सर्ट सर्किट जीवन को छोटो बनाउँछ। धेरै छिटो ऊ त्यस्तो बाटोमा जान्छ जुन अस्तित्वमा छैन। नतिजा स्वरूप, उनीसँग अनुभव छैन। उसको सफलता तातो र खाली छ र मासुविना नै छ, तर सर्ट सर्किटको क्यारिश्माई प्रभाव छ। सब भन्दा छोटो मार्ग सँधै सर्ट सर्किट हुन्छ, यसको लक्ष्य बकवास भनिन्छ। सर्ट सर्किटले बृद्धि बिना कार्य गर्दछ, यो बिना कुनै मार्गमा जान्छ। जोआकिम अर्न्स्ट बेरेन्टले एउटा पुस्तक लेखेका थिए: '' त्यहाँ कुनै मार्ग छैन, केवल हिंड्ने: प्रकृतिमा BEIN ''। आफ्नो पुस्तक प्रस्तुत गर्न को बाटो मा, उहाँ एक कार द्वारा चलाइएको थियो।
तपाई डराउनुहुन्छ कि हिँड्न सक्ने खण्डमा पर्दछ। तर हिड्ने महान छ: यो सँधै सन्तुलनमा रहन्छ। कोरिडोरमा स्थायी चालहरू। यद्यपि, सुत्न कहिल्यै काम गर्दैन।
धराशायी हिमालहरूको कुनै समस्या छैन र तिनीहरू खुसी छन् कि यती बढेको र यति ठूलो छ। पहाडहरूले यसलाई हेर्दा स्वर्ग पनि खुसी हुन्छ। ठूला आकाशलाई पनि विश्वासको आवश्यकता छ।
कारण तल छ। यो आधार, भुइँ, प्लिन्थ र फाउन्डेशन हो। यदि तपाईंले तल हेर्नुभयो भने, त्यसपछि यो अगाध खाडलमा परिणत हुन्छ। तपाईं त्यहाँ गुरुत्वाकर्षण देख्न सक्नुहुन्न। तल र अगाध खाडलले स्नायुहरूलाई अत्यन्त शान्त गर्दछ। मानव को लागी सबै भन्दा राम्रो गतिविधि चीजको तल पुग्नु हो। केवल डरलाग्दो खरायोले केहि उपयोगी गर्न रुचाउँछन्, किनकि उपयोगी संसार नाश हुन्छ।
भूमिगत संसारको तल छ। यो लगभग अब संसारमा सम्बन्धित छैन, तपाईलाई यो थाँहा छैन, यसैले तपाईं घरमा महसुस गर्नुहुन्न। मृतकहरू जमिनमुनि छन्, त्यहाँ उर्वरताको स्रोत पनि छ। अरू सबै कसरी बढ्ने थियो?
बादल स्वर्गमा भेडा हो। बादल सधैं दु: खी हुन्छन्। तिनीहरू प्रायः रुन्छन्। तर ती पनी जनावरहरूलाई आक्रामक घामबाट पनि जोगाउँछन्। एक बादलले मानिसहरुको राम्रो र नराम्रो चीज माथि राख्छ। तपाईं तिनीहरूको आकारबाट भन्न सक्नुहुन्छ कि कुन घडी आयो। क्लाउडमा एकसाथ आन्दोलन र पानी नाच।
तपाईंले सलादमा फोहोर राख्नु हुँदैन। अन्यथा रोग खतरा! मलिनता पापको शारीरिक बराबर हो। घाउलाई प्रदूषणको रूपमा देख्न सकिन्छ, किनकि घाउले प्रायजसो किनारमा घिनलाग्दो भाँडो बनाउँछ जुन फोहोर जस्तो देखिन्छ। पालैपालो, दूषित वा दाग दोषी संकेत गर्दछ। कोही दागी छ के हामी असिद्ध भएकोले के हामीलाई चोट पुगेको छ? वा हामी त्रुटिपूर्ण छौं किनकि हामीलाई चोट पुगेको छ? वा हामी केहि, कानून वा एक व्यक्ति उल्लंघन को दोषी छ? तर हामी चोट गर्दैनौं! हामी सिद्ध र निर्दोष छौं! जो कोही जसले त्यस्तो कुरा दावी गर्छ ऊ चोट पुर्‍याउँछ र दोषी छ।
जेलका भित्ताहरू मुटुको गठन गर्दछन्। यसको बाहिरी भित्ताहरू बाहिर कालो र भित्र रातो छ। कैदी रास्पुतिन अब कान्छो छैनन्, तर न त उनी जेठो हो, किनकि उसको अझै एक्ने छ। जर्मनिया पनि जेलमा छ: रसपुटिन र जर्मनीिया सँगै सुत्न जान्छन्। रसपुटिन डर छ कि जर्मनीले सिफलिस संकुचन गर्नेछ। जर्मनीले रसपुटिन छोड्छ। उसले सायद पिप्पीलाई छोटो समयको लागि मात्र गर्नुपर्दछ, तर उनी टाढामा पुग्ने छैनन्, किनकि हामी हृदयको जेलमा छौं। जेल भनेको एउटा यस्तो भवन हो जसबाट बच्न सकिदैन। रसपूतिन ऐनाको अगाडि उभिन्छन् र आफ्ना पिम्पल्सहरू व्यक्त गर्छन्। पूस चाँदीको निर्दोषतामा फस्छ: पूर्ण रूपमा घृणित, ey।
मुसा र आणविक बम
मुसाहरू चूहाहरू हुन् जो मेगालोमानियाक गएका छन्। तिनीहरू रेडियोएक्टिभिटी सबै जीवित चीजहरूमा उत्तम सहन गर्दछन्। निश्चय पनि एक दिन तिनीहरू पृथ्वीका राजा हुनेछन्। मुसाले एक अर्कालाई मार्दछ, ती मानिससँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। अनुमान लगाउन सक्ने को लागी! यद्यपि, मुसा मानिसहरू भन्दा चतुर हुन्छन्, किनकि उनीहरूले विषाक्त खाना नखान धेरै छिटो सिक्छन् जब उनीहरूले तिनीहरूको षड्यन्त्रकारीको मृत्यु देख्छन्। त्यसकारण, मुसाको विष यी नरक जीवहरूलाई नष्ट गर्नका लागि स्थायी समाधान होईन। मध्य युगमा मानिसहरूलाई मुसाले यातना दिएका थिए, आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूमा मुसालाई यातना दिइन्छ। यो मानवता को लागी एक विजय हो! पीडित देखि अपराधी! भारतीय करणी माता मन्दिरमा, प्यारा चूहों पालन पोषण र हेरचाह गरिन्छ। पश्चिममा यद्यपि त्यहाँ केवल ढल्काइका ढलहरू छन्।चीनमा राशि चक्रको रूपमा चिह्न पनि छ। तर एसेप्टिक साइकोसौरसले यसो भने: “हामी मध्य युगमा बाँचिरहेका छैनौं! संक्रमणको घृणित वाहकहरूको साथ टाढा! राजनीतिज्ञहरू किन केही गरिरहेका छैनन्? तिनीहरूले कहिले पनि केही गर्दैनन्! "
तपाईं एक कink्क स्पर्श गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो प the्क्तिबाट टाढा छ जहाँबाट यो नाचिरहेको छ। यदि केहि केन्क हुँदैन भने त्यहाँ चीजहरू छन्। एक रेखा यहाँ बाट जान्छ। यो यति सामान्य छ कि यसले तपाईंलाई निराश बनाउँछ। वैज्ञानिकहरु र वास्तुकारहरु लाईन लाईन। रेखाले जीवन खाँदैन। रेखाले जीवन स and्कलन गर्दछ र उर्जा प्राप्त गर्दछ यसबाट कोठा एक मध्यम २० डिग्रीसम्म ताप्नको लागि।
ढलान एक ढलान हो जुन ढलानको लोकप्रियता अनुसार ढलान हुन्छ, ढलानको ढलान अनुरूप कोणमा मोडिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति मनमानी हुँदैन, तर झुकाव को प्रेम संग मेल खान्छ।
राम्रो एक रूख हो कि फल वर्षभर फल दिन्छ। यसको काठ ठोस रगतको छ; यसको पातहरू हाँस्न सक्छन्। रंगीन राम्रो छ, खैरो खराब छ। शैतानले राम्रो खायो। राम्रो आफैमा सामेल हुन सक्छ। तर खराब असलको नाशमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण दुष्टता कहिल्यै विजयी हुन सक्दैन।
नुन सोडियम र क्लोरीन मिलेर बनेको हुन्छ। उभिने आफ्नै दुई खुट्टामा उभिन्छ, तर अस्तित्वलाई जमीनको रूपमा पदार्थ चाहिन्छ। अस्तित्वको अंशहरू आवश्यक पर्दछ जुन यसलाई समावेश गर्दछ, यो आफैमा हुन सक्दैन। Coarsest अवस्थित छ। शब्द "स्टक" पदार्थको एकदम नजिक आउँदछ।
माउस र ब्याट
चूहोंका चार खुट्टाहरू हुन्छन् र परमेश्वरको आदेश अनुसार हिंड्छन्। यद्यपि केही चूहोंले तिनीहरूको उद्देश्य असफल गर्यो र उडाियो। सबै दिन तिनीहरू आलस्य वरिपरि झुण्डिरहन्छन् (उल्टो) र राती पार्टीि (हुन्छ (रगत र सामानहरू पिउँदै)। ब्याटको रूपमा माउस अन्धा छ। यो उनीहरूको पापको लागि परमेश्वरको सजाय हो। आपतकालीन समाधानको रूपमा, उडान चूहोंले अब उनीहरूको कानहरूसँग हेर्नु पर्छ। त्यो अति उत्तम छ।
पातलो महिलाहरू एनोरेक्सियाको डकमा छिट्टै बस्छन्। Flabby र बोसो कथानक को आरोप लगाइएको। यदि पातलो तौल प्राप्त गर्न चाहन्छ भने, यसलाई "स्लिम" भनिनु पर्दछ। पातलो कहिलेकाँही बाक्लो भन्दा बढी गहन प्रभाव पार्छ, किनभने यसले यसको मिठो पेटमा धेरै सार मिसाउन सक्छ। त्यसकारण पातलो अक्सर बाक्लो भन्दा बढी बौद्धिक हुन्छ। पातलो बोर्ड ड्रिलहरूमा यो लागू हुँदैन, किनकि तिनीहरूको टाउको अगाडि बाक्लो बोर्ड छ।
मेरो नाम श्मिट हो र म मरे छु। शैतान एण्ड सन्समा मेरो कार्यस्थलमा, मेरो लोभी मालिक १०० यूरो नोटमा परिणत भयो। म मृत्यु पछि आनन्दित जीवनको लागि मेरो मौका महसुस: म चाँडै मेरो पर्स मा नोट राखे र बाहिरी छाला मा एक क्रूसमा चित्रित। मेरो मालिक फन्दामा थियो। मेरो मृत्यु पछि म नरकमा जाने छैन भन्ने उनको आश्वासन पछि मात्र मैले फेरि क्रस हटाइन। त्यसको लगत्तै, म खुशीको साथ AOK अगाडि केराको बोक्रामा खसे र मेरो टाउकोको पछाडि कडा फुटपाथमा खसे। म तुरुन्तै मरेकी थिएँ। प्रतिज्ञा गरेझैं म नरकमा गईनँ तर तिनीहरू स्वर्गमा पस्न चाहेनन् किनभने मैले दुष्टलाई पराजित गरें,तर अझै राम्रो काम गरेको छैन। अब म निरन्तर स्वर्ग र नरकको बीचमा पछाडि हिंडिरहेको छु र अब के गर्ने मलाई थाहा छैन।
फ्रेड: दुःख पूर्ण रूपमा अनावश्यक छ। कुन मूर्खले वास्तवमा संसार बनायो?
डेटलेफ: पीडितले बेवकूफ कार्यहरूको विरूद्ध संरक्षण गर्दछ। यसले तपाईंलाई धेरै बियर पिउन रोक्दछ। खराबी राम्रो गर्न जान्छ।
फ्रेड: त्यहाँ अर्को तरीका छैन? केहि बढी मायालु?
पोप: भगवान अयोग्य हुनुहुन्छ (म जस्तो), उसलाई पहिले नै थाहा छ कि किन उनले यस प्रकारले संसारको सृष्टि गर्नुभयो।
मेफिस्टो: म त्यो शक्तिको भाग हुँ जो सधैं खराब चाहान्छ र सँधै राम्रो सिर्जना गर्दछ।
बर्ट Hellinger: एक उच्च स्तर मा, दुष्ट पनि राम्रो छ।
फ्रेड: म पृथ्वीमा बस्छु; पृथ्वी तल्लो स्तर हो, मलाई उच्च स्तरको कुनै कामको छैन। यो कुनै पनि धेरै विश्वस्त छैन।
डेटलेफ: सूर्य देवताले पनि दुःख भोग्यो। उहाँ क्रूसमा एक व्यक्तिको रूपमा मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो।
फ्रेड: त्यो उहाँसँग एकतामा छ। मैले पहिले नै धेरै राम्रो महसुस गरें।
परमेश्वर भन्दा महान छ ... एक व्यक्ति कल्पना गर्न भन्दा परमेश्वर सधैं महान् हुनुहुन्छ। सुरक्षित पक्षमा हुन, म भगवानको बारेमा खराब लेख्न चाहन्न, तपाईलाई कहिले थाहा छैन। जबसम्म ईश्वर शैतान होईन। के दुष्ट परमेश्वर वास्तविक देवताहरू हुनुहुन्छ? वा के तिनीहरूको अस्तित्व राम्रो खानेकुरामा पोषण गर्दछ? यदि त्यहाँ एक मात्र ईश्वर छ भने, एक व्यक्तिले मात्र उसलाई अल्लाह भन्न सक्छ। दुई तटस्थ र सबै encompassing ए ध्वनि असीम एल ध्वनी flank। यदि त्यहाँ धेरै ईश्वरहरू छन् भने, यो अझ रंगीन र मायालु हुन्छ र मानिसहरूलाई अझ बढी बुझ्न पनि सकिन्छ। अन्य देवताहरूको माझमा प्रत्येक देवताको जिम्मेवारिको आफ्नै क्षेत्र हुन्छ। अल्लाहको अब 99 99 नामहरू हुनुपर्दैन, किनभने त्यहाँ gods 99 देवताहरू छन्। र सयौं देवताले सम्भवतः सबै देवताहरूलाई एकजुट गर्नेछ, त्यसैले यो मानिन्छ।राम्रो र नराम्रो मा कट्टरपन्थी ध्रुवीकरण भगवान को गुणा मा विलीन हुन्छ। कहिलेकाँही देवताहरूलाई स्वर्गदूत, प्रधान दूत वा उच्च प्राणी पनि भनिन्छ।
लसुन बासी ताजगी हो। उसको खुट्टाका औंलाहरू विभाजित छन्। व्यक्तित्वमा वास्तविक विभाजनको यसको जरा हुन्छ। बाहिरबाट तथापि, प्याजले एकरूपता प्रदर्शन गर्दछ। लसुनले भ्याम्पायर र चुरोनीहरूको विरुद्धमा मद्दत गर्दछ। कन्द रगतलाई सुदृढ पार्दछ र परजीवीहरूको लागि यति अखाद्य बनाउँदछ कि भ्याम्पायरले पनि आफ्नो भोक हराउँछ। स्किजोफ्रेनिक लीकले शारीरिक परजीवीहरू मार्छ, जस्तै टेपवार्महरू र पुट्रेफ्याक्टिभ ब्याक्टेरिया। लसुन सिगरेट धूम्रपान जस्तै मानवता विभाजित। केहिलाई मनपर्दछ: यी राम्रा मानिसहरू हुन्। नराम्रो मान्छे (उदाहरण: भ्याम्पायर, चुरोट, नाजीहरू, बाल fuckers, पूंजीवादी र ग्रीन्स मतदाता) यसको गन्धले हटाएको महसुस गर्दछ।
शैतान संग सम्झौता
तपाईं चाँडै नै एक धनी र सुन्दर बन्न सक्नुहुन्छ शैतान र संसको सेवा कार्यालयमा एक सानो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर: ठेकेदार (शैतान) हरेक सांसारिक इच्छा पूरा गर्दछ। बदलामा, ठेकेदार अनुसन्धान उद्देश्यको लागि नरकको एनाटोमिस्टहरूलाई उनको मृत्यु पश्चात आत्मालाई बिदाइ गर्दछ। अनुबन्धक कानूनी रूपमा ठेकेदारबाट रगत को एक ड्रप संग मान्य छ।
अर्नोल्ड महामारीको बारेमा कल्पना गर्छ जुन पृथ्वीमा आउँनेछ र सबै नराम्रा मानिसहरूलाई मार्नेछ। राम्रो व्यक्तिहरू पहिलो ठाउँमा बिरामी हुँदैन वा सजिलै संक्रमणबाट बच्दछ। अर्नाल्ड एक राम्रो मान्छे हो, पक्कै पनि। यद्यपि ऊ कसरी यकिन हुन सक्छ? कसरी प्लेग वास्तव मा राम्रो मान्छे मार्दछ भने के गर्ने? त्यो मतलब, तर यो संसारको अन्यायको विशिष्ट हुनेछ। अर्नल्ड डराउँछन् र भाग्यको खोप लिन चाहन्छ, यद्यपि उनलाई थाहा छ यो सम्भव छैन।
चेतनाले चीजहरूलाई अस्तित्वमा राख्छ। काट्नु स्टिंगि than भन्दा बढी रमणीय छ, त्यसैले यो एउटा लामखुट्टे कुलीनको शीर्षक छैन। कडा आत्माको साहस लिन हिम्मत छ, डरपोक घरमा कुनै ब्लेड छैन। तपाईंले आफ्नो औंला काट्नु हुँदैन! मान्छेहरू: होशियार! कटको रंगलाई शार्पनेस भनिन्छ। तातो खुर्सानी र सेक्स बम पनि केहि समय मा एक मसलादार हुन सक्छ।
हतियार तान्न। हातमा पाखुरा फुल्न थाल्छ। हतियारहरू हातमा परिष्कृत हुन्छन्, हातहरू उपकरणमा मजबूत हुन्छन्। हाँगाहरू रूखका हतियार हुन्।
एक सीमा एक अर्को बाट अलग गर्दछ। यो सिमानामा शुरू हुन्छ वा समाप्त हुन्छ। सीमा जीवनको लागि एक पात्र बनाउँछ। रगत बाँच्नका लागि नसा चाहिन्छ। एउटा घरले उसको भित्तामा बास गर्छ। जब जीवित उसको घरबाट बाहिर जान्छ, यो बेघरको समुद्रमा डुबाउँछ।
प्लेटमा एक गोल रिम छ। फ्रेमको विपरीत, किनाराले यसको मालिकको वेक्सिंग पूर्ण गर्दछ। एक फ्रेम गहना हो, यो प्रसार रोक्न बाध्यता हो।
शब्द "संसार" ले सबै चीजको परिदृश्य वर्णन गर्दछ। संसारलाई एक घातक आकारको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस संसारको अन्त छैन। मानव हेराईहरूले अन्तहीन सडकहरूमा कुनै समर्थन फेला पार्दैन। एक सुरक्षित विश्व यसको किनारमा बन्द छ। त्यहाँ सुरक्षित संसारले परिमाणको हतियारको साथ असीमितलाई अँगालेको छ।
उज्यालो र अँध्यारो
गुस्ताभ दुबै कर्नमा अन्धा छ। उसको खुट्टाले केही देख्न सक्दैन। यो एक राम्रो कुरा हो, किनकि यदि तपाई केहि देख्न सक्नुहुन्न भने तपाई निराश हुनुहुन्न। त्यसैले गुस्ताव खुसी छ। त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसको अन्धा मिति छ। तपाइँ रेन्डेजभस गर्न धेरै अन्धा हुनुहुन्छ। चमत्कारीहरूले पनि कालो देख्दछन्, तर चर्को रूपमा सुन्छन्। के उज्यालो अँध्यारोमा अन्धा हुन्छ? के अन्धकारले उज्यालो देख्दछ?
चन्द्रमा अन्धकारमा हाँस्दछ। ऊ पूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ। पूर्णिमाको रूपमा उहाँ पुरुष हुनुहुन्छ। अन्यथा उनी महिला छन्। वा यो अर्को तिर थियो? चन्द्रमा आकाशमा डरलाग्दो scurries। ऊ देखिन मन पराउँदैन; केवल भिरालुहरू, चमगादुर र कागहरूलाई पनि त्यसो गर्न अनुमति दिइन्छ। चन्द्रमा बुराईको संसारमा गोप्य रूपमा शासन गर्दछ, यो गोल गालको साथ छलछाम हो, यो एक पुरानो प्रेम हो, चम्मा भन्ने चम्किलो अँध्यारो हो। जब सभ्य मानिसहरूले सुतिरहेको हुन्छमा चन्द्रमा सबैभन्दा चम्किन्छ।
त्यहाँ केवल एक क्षण हो र यो सधैं एक समान हुन्छ। केवल क्षण एक क्षण हो। बहुवचन "क्षणहरू" कुनै पनि अर्थ राख्दैन। त्यसैले त्यहाँ समय छैन। र अझै घडीमा टिक छ। यसैले घडीहरू झूटा हुन्।
व्यक्तिलाई बिर्सनै सक्दैन। हामी हाम्रो वर्तमान क्षण बाट विगत देख्छौं। प्रत्येक दिन तपाईलाई बिगतको याद आउँछ। यो कसरी वास्तवमा भयो अप्रतिभूत हरायो।
सुरुमा त्यहाँ दूध थियो। ब्रह्माण्ड दुधबाट सिर्जना गरिएको थियो, यसैले हामी मिल्की वेको पनि बोल्दछौं। दूध मूल गाईको ठूलोबाट आयो, ठूलो MUU।
ताजगी जीवनको ओसिलोमा प्रकाशको रूपमा गाउँदछ। सडेको मासु सडेको मासु भन्दा स्वस्थ छ। रगत भन्दा फलको रस नयाँ, किनभने यसको लोभ मा जनावरहरु rots।
कछुवाहरू प्राचीन भ्रुणहरू हुन्। तिनीहरू एक समय हो जब कुनै समय थिएन। तिनीहरूको कुरा पनि फरक छ। यसले साना साना कणहरू समावेश गर्दैन, बरु नरम पल्पको रूपमा कठोरता यहाँबाट अर्को तिर जान्छ। वास्तविक पृथ्वी कहिल्यै मर्दैन।
हावा गोप्य रूपमा ध्वस्त भएको महलको भग्नावशेषबाट बहँदैछ। गाढा पर्खाल घटनाहरूको खाली छ। फायरस्टर्म्सहरू हिजो थिए, दागहरू अहिले छन्। एउटा माउस लेख्न र कागज मर्न बर्बाद को कथा बताउन सक्छ। चराहरू रातको रातको घाममा उडेर कतै पनि हराउँदछन्।
ऊर सधैं पहिले आउँछ। कारण, उत्पत्ति, आदिम सूप, यूरेनस, प्राइमभल गाईवस्तू, पूर्वज, प्राइभल वन, ठूलो धमाका, र पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र र देहात महान हजुरबा हजुरआमा। पछिल्लाहरू पूर्ण रूपमा खतरनाक शब्दसँग परिचित थिएनन्। भियनामा, `` धेरै खतरनाक '' भनेको केहि खास चीज जोखिमपूर्ण छ।
पृथ्वी समतल छ! यदि पृथ्वी एक क्षेत्र थियो, तब न्यूजील्याण्डका मानिसहरू पृथ्वीबाट खस्नेछन्। NASA लाई यसको नक्कली फोटोहरू आफ्नो गधामा टाँस्न दिनुहोस्। तिनीहरूले धेरै चन्द्र हावा सुँघेको हुनुपर्दछ!
शुरुवात अचानक स्प्रिन्टको रूपमा सुरु हुन सक्छ वा शरद theतुमा कुहिराहरू जस्तै माथि बढ्न सक्छ। बोटबिरुवाहरू अंकुरित हुन्छन् र शिशुहरू अस्पतालमा कीटाणुमुक्त हुन्छन्। एउटा सुरुवातको अर्थ अन्त हुन्छ: बच्चाको जन्मले गर्भावस्था समाप्त हुन्छ। सुरुले आफैलाई थाहा छैन: अन्त मात्र अन्त्यमा शुरु को थाहा हुन्छ यो को थियो।
बच्चाहरूले बच्चाहरूको चकलेट खाउँदछन्। वयस्कहरूले वयस्क चकलेट खान्छन्। दुबै उत्पादहरु चकलेट जस्तै स्वाद। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, बच्चाहरू केहि विशेष छैनन्। तिनीहरू तपाईं र म जस्तो चकलेट खानेहरू हुन्। बच्चाहरूलाई कि त पानी भर्नु पर्दैन, यद्यपि तिनीहरू बालवाडीमा जान्छन्।
एक toadstool आफ्नो स्वतन्त्रता मन पर्छ। यसलाई माथिबाट वर्षा चाहिन्छ। तर रातो मशरूमले परमेश्वरको आवेग प्राप्त गर्न अस्वीकार गर्दछ। फ्लाई एग्रीकले सबै कुरा नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। यो सचेतकको मालिक पनि हो। प्रभुत्व यो महत्वपूर्ण छ। वर्षा फ्लाई एग्रीकमा खस्दछ। फg्गलस नोटिस गर्दछ, त्यहाँ प्रभुत्व बाहेक अरु कुराहरु छन्, तर agaric आफैँ खोल्न को लागी हिम्मत गर्दैन। अनि उसले यो गर्छ, किनभने ऊ साहसी छ। डर शीर्षबाट मशरूममा आउँदछ। हे यो। उहाँ अब एक टडस्टूल हुनुहुन्न, तर सानो माउस, जो यसको गुफामा मध्यमवर्गीय जीवन बिताउन चाहन्छ। तर यसले काम गर्दैन। माउस दर्शन दर्शन र संसारको नवीकरण र प्रसिद्ध हुन्छ।
मार्टिन लूथर र पावल बिजुली चम्के। तिनीहरू बिजुली जस्तै छिटो प्रबुद्ध मानिस भए। के हामीलाई बिजुली चम्काउँछ? वा बिजुली एक छोटो सर्किट मात्र छ कि कपट पैदा गर्दछ? तपाईंले अर्को गर्जनको बेलामा यसको प्रयास गर्नु पर्छ।
Bielefeld मा JF क्यानेडी
एक कथित षडयन्त्र सिद्धान्तले भन्छ कि बीलेफेल्ड शहर अवस्थित छैन। कुनै खास समयदेखि छायाँहरू सम्भव नभएको बिलेफेल्डको अस्तित्व रहेको छ। यसैले उनीहरूले यो षड्यन्त्रलाई केवल सिद्धान्त वा ठट्टाको रूपमा प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो, ताकि कसैले पनि बिलेफेल्टको जालसाजी सत्य हो भनेर सोच्न सक्तैनन्। तर भाग्यवश त्यहाँ बिल छ। जुलाई २,, १ 63 .63 बिल क्लिन्टन ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ क्यानेडीलाई भेट्न आए र उनको हात मिलाए। क्लिन्टनले भने, "म राष्ट्रपति बन्नेछु!" यस जादुई कार्यबाट क्लिन्टनले तत्कालीन राष्ट्रपति क्यानेडीबाट आफ्नो भाग्य र पहिचान चोरेका थिए। परिणाम: क्यानेडीको मृत्यु भयो। वा बरु आफ्नो doppelganger।वास्तविक क्यानेडी स्थिर थियो। जब Bielefeld को नक्कली अस्तित्व प्रकाशमा आउने धम्की, क्यानेडी फेरि थागियो। जर्मनमा कस्मेटिक शल्यक्रिया र गहन प्रशिक्षण पाएपछि, क्यानेडी अहिले पिट क्लाउसेनको झूटा नाममा बिलेफेल्डको छाया शहरको लर्ड मेयर हुन्।
सिन्डबार्ट: हे तिमी, म तिमीलाई देख्न सक्छु!
विन्डबर्ट: पागलपन! म पनि तिमी आश्चर्यजनक जब तपाईं विचार गर्नुहुन्छ कि हामी दुई जना अवस्थित छैन।
सिन्डबार्ट: जब दुई जना मानिस भेटे जो अस्तित्वहीन नै हुँदैन, तिनीहरू एक अर्काको सम्बन्धमा वास्तविक हुन्छन् र एक अर्काको लागि, किनभने तिनीहरू दुवैले एउटै स्तरमा भेट्छन्, अर्थात् अस्तित्वहीनताको स्तर।
विन्डबर्ट: तपाईले जस्तो व्यक्तिलाई कमै मिल्नुहुन्छ। तपाईं सायद कम नै वास्तविक पाउनुहुन्छ। धोखा र सत्यको बारेमा लामो कुराकानी गर्ने अवसर हामीले लिनुपर्दछ।
सिन्डबार्ट: महान, म त्यहाँ हुनेछु।
समुद्रले आफूलाई महानताको अनुमति दिन सक्छ किनकि यसले गोप्य राख्छ। समुद्र देवताहरूको आँसुबाट बनेको छ (आँसुमा नुन हुन्छ)। समुद्र पृथ्वीको लागि खाना हो। मरुभूमिको तिर्खा, तथापि, लामो समयदेखि सुख्खा भएपछि, मरुभूमि अब बाँच्न आवश्यक पर्दैन।
अर्नाल्ड हेटर्मन टेलिभिजन हेर्दैन वा अखबार पढ्दैन। केवल शीर्षकहरू। ओट्टो सामान्य को लागी वर्तमान के महत्वपूर्ण छ, अरु सबै महत्वहीन छ। अर्नल्ड ठूलो चित्रमा चासो राख्छन्, मेम्फ्लाइसमा होइन। थप रूपमा, तपाईलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन यदि जानकारी सहि छ कि छैन। यदि हेडलाइन पढ्नुपर्‍यो: "भोली संसार अन्त हुनेछ!", श्री हेटर्मनले पक्कै पनि पूरा जानकारी पढ्नेछन्। संसारको अन्तले तपाईंलाई वास्तवमै असर गर्न सक्छ व्यक्तिगत कारणका लागि।
पानी सर्न मन पर्छ। यदि प्रकृतिले यसलाई अनुमति दिन्छ भने, यो पनि बग्दछ। पानी ताजा छ र आफैमा गाउँदछ। यसको तरंगहरूको आन्दोलनको साथ हल्का चमकहरू। पानी जहाँ जहाँ जीवन छ जहाँ छ। पानी अस्थिर छ जबसम्म यो तलमा आराम गर्दैन। नीलो पानीको पोशाक, पानीको नग्नता अस्पृश्य रहन्छ।
एक भ्यागुता हुनु हुँदैन डर ड्याogग होइन जो कोही पानीको नजिक बनाइएको छ भ्यागुता अझै पनि आत्मामा बास गर्दछ। सोल र ताल एउटै पानी हो, माछा र भ्यागुतालाई यो थाहा छ। तपाईं पानीमा वास्तवमै डराउन सक्नुहुन्न, केवल सुख्खा जनावरहरूले मात्र गर्न सक्दछन्। डराउने खरायोलाई सोध्नुहोस्! डरलाग्दो भ्यागुता होइन! भ्यागुता कहिले पनि यौवनबाट बाहिर निस्कदैन। भ्यागुतो एक माछा हो जुन यसलाई जमिनमा बनाएको छैन: विकासको विफलता। उहाँ अब माछा होइन, तर यो एक बन्दर बनाउन पर्याप्त थिएन। भ्यागुताहरू कानको पछाडि अझै हरियो छन्, र त्यहाँ मात्र होइन। प्रायजसो भ्यागुताहरूले पिम्पल्सहरू प्राप्त गर्दछन्, तर त्यसोभए तिनीहरूलाई थाड पनि भनिन्छ।
जंगली डुars्गा रोमको धुवाँदो शहरको घरको छतबाट उफ्रन्छन्। जंगली सुंगुरहरूले उनीहरूको पीठमा तल फुटपाथमा हिर्काए। जंगली सुअरले केहि पनि भ .्ग गरेन, उनी सजिलै ग्रुन्ट्छिन् र बस्छिन्। यस्तो जंगली सुअर वास्तवमै कडा छ। तपाईंको रगत मुड्दैन। उनको आगो को रस शक्तिशाली स्ट्रोक मा उसकी नसिकाको दौड माध्यम को लागी कालान्तर पल्सट्स।
भावनाहरूको र color छैन। तिनीहरू अविश्वासी ठगहरू हुन्, तिनीहरूको एकमात्र समर्थन अनन्तता हो। के तपाईं आफ्नो मनलाई भावनाहरूमा डुबाउन सक्नुहुन्छ? भीड र जनसाधारणका लागि भावनाहरू तातो हुन्छन्, तिनीहरू बलियो र कमजोर हुन्छन्, तिनीहरू कराउजेलमा रहेका घोडाझैं अकल्पनीय रूपमा फर्कन्छन्।
विश्वको चौडाई गहिराइमा डुब्छ। सबै कुरा सुत्न जान्छ र चन्द्रमा आकाशमा छ। यसको चाँदीको प्रकाश विनाशमा प्रवाहित हुन्छ। एक हातले चन्द्रमालाई समात्न चाहन्छ र यसले गर्छ: यसले चन्द्रलाई कुच्यो। चाँदीको रगत जुन समान रूपले कालो छ, यो एक चन्द्रमा भएको क्षेत्रबाट तल बग्छ। संसार थरथर काँप्दै छ।
मृत्युले जीवनलाई बेवास्ता गर्दछ र एकै समयमा सम्भव बनाउँदछ। चीललाई के बाँच्नु पर्छ? उसले पछाडि के छिटो गर्नुपर्छ? ऊ अरू जनावरहरूलाई मार्दा मात्र बाँच्न सक्छ। मान्छे जस्तै! Vegans do-gooder हो। तर तिनीहरू पनि प्रकृति को बोलावट जवाफ छ। सबै पछि, बिरूवाहरू पनि जीवित चीजहरू हुन्। शाकाहारीहरू भिटामिनको कमी हो। तिनीहरूको निर्दोषपनले उनीहरूलाई पहेंलो देखिने बनाउँदछ, तिनीहरू जैवविम्पायर हुन्। शाकाहारीहरूले नैतिकताको रगत पिए। सबैभन्दा ठूलो सिकारी मानिस हो।
मृत टीवी दर्शक
टेलिभिजन खुला छ र यसको अगाडि एउटा कंकाल बसिरहेको छ। उसको खाली खोपडी हड्डीहरूले कार्यक्रमबाट केहि पनि याद गर्दैनन्। कसैले टेलिभिजन बन्द गर्दछ: हड्डी मान्छेले अब महसुस गर्यो कि उसले केहि हराइरहेको छ, र ऊ रिसाउँछ। केवल फिर्ता गर्दा मृत्युले यो मृत भएको याद गर्दछ।
जीवनको उद्देश्य महान कृषि वैज्ञानिकलाई खुवाउनु हो। कम से कम त्यो डा। को राय छ। लाइटब्रेन। उहाँ निम्न कुराहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ: टाढा स्वर्गबाट ​​महान् कृषि अर्थशास्त्रीले हाम्रो प्राणको बीउ साकार माटोमा रोप्दछन्। जीवनको अनुभव मार्फत आत्मा जीवाणु आत्माको उत्पादक कानमा बढ्छ। महान कृषि अर्थशास्त्री हाम्रो कान पछि यो कान काट्छन् र यसलाई खान्छन्। डा। ब्रेनलाइट डा। को जुम्ल्याहा भाइ हुन्। लाइटब्रेन। हरेक बिहान डा। ब्रेनलाइटले पूरै माइन मुसली पछि फ्याँक्छ जब ऊ आफ्नो भाइको कच्चा सिद्धान्तको बारेमा सोच्छ।
सूर्य संसारको मुटु हो, यसमा ठाउँ भन्दा बढी ठाउँ हुन्छ। उनीसँग ठूलो, चम्किरहेको पेट छ। सूर्यले संसारलाई जन्म दिन्छ। सूर्य संसार खान्छ। दुबै समान सूर्य नै सबैकुरा हो। यो पुरानो मानिसमा सेतो छ, यो युवाहरूमा पहेलो छ। सूर्यको अनुहारमा कुनै झिम्का छैन।
एउटा भ्याम्पायरले ऐनामा हेर्छ: कालो कपाल र चश्मा लगाएको मानिस चाँदीको बाहिरबाट हेर्छ, उसको अनुहार पहेंलो हुन्छ। भ्याम्पायरले सोचिन् कि उनी ऐनामा सामान्य मानिस जस्तो देखिन्छिन्। Undead केवल आफूलाई ऐनामा आफूलाई चिन्छ, यदि उ सीधा आफ्नो हात र शरीर मा हेर्छ, तब ऊ कसैलाई देख्दैन। यो सामान्य छैन, भ्याम्पायरको लागि पनि होईन। पक्कै पनि उनीसँग रेबीज छ।
बिरुवाहरू हरियो जनावरहरू हुन् जुन हिंड्न सक्दैनन्। यसको पातहरू पानीले बनेका ढु .्गाहरू हुन्। सूर्यको किरणले ती सबैलाई हरियो बनाउँछ। ढुone्गा, पानी र सूर्य सबै एकैचोटि जीवन दिन्छ। एक बोट बिरुवा बढ्दछ, यो बढ्न रमाईलो। बढ्दै जाने कुनै जीन हुँदैन, तिनीहरूलाई प्रत्येक क्षण थाहा हुन्छ। योजना बढ्दैन यदि तपाईं यसलाई पूरा गर्नुभयो भने पनि। अर्कोतर्फ, बोटबिरुवाहरू जीवनको बिरोधमा बढ्छन्।
एकदम धेरै बाक्ला कपालहरूले कडाईमा टाउकोमा हिर्काए। कठोरता प्रतिरोध र स्थायित्व प्रदान गर्दछ। एउटा कंकाल कडा छ। सामान्यतया कडा हार्ड रहन्छ। यद्यपि एक लिis्ग कहिलेकाँही कठिन हुन्छ। - किन? - कडाई को किनारा कोठा मा एक थोपा रेखा को रूप मा खडा छ। किनारहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन; तपाईं आफ्नो टाउको उनीहरूमा टार्न सक्नुहुन्छ। जब दुई पर्खाल आपसमा मिल्दछ, टकरावलाई किनारा भनिन्छ। त्यसैले एक किनारा एक टक्करको परिणाम हो। त्यसैले यो मुटुको बेहोशको लागि छैन। ढुones्गा पनि गाह्रो छ। ढु stone्गा चीज हो, यसको अनुहार हुँदैन, किनकि ढु stone्गा अन्य ढु stones्गा जस्तो देखिन्छ। सबै चीजहरू तिनीहरूको अस्तित्वमा बराबर छन्। कपाट, टेबल वा टूथब्रश, यी सबै केवल चीजहरू हुन्। ढु everywhere्गा जताततै पडीरहेको छतिनीहरू वास्तविकता भनिन्छ। तपाईं अन्य व्यक्तिको खोपडीलाई ढु with्गाले प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ। यो ढुone्गा युगमा महत्त्वपूर्ण थियो। आज केही ढु stones्गाहरू पहिले नै बोल्न सक्दछन्, यी ढु stones्गालाई "सेल फोन" भनिन्छ। यदि मैले यसको बारेमा सही सोच्दछु भने: त्यहाँ सुन्दर ढु stones्गाहरू पनि छन्, बहुमूल्य पत्थरहरू। ड्रेगन तिनीहरूलाई संकलन।
संकलित घन, कहिलेकाँही साँघुरो पनि हुन्छ। जुन स is्कलन गरिन्छ त्यसले इन्भन्ट्रीको रूपमा सुरक्षा दिन्छ। वा यो एक बोझ हो। के स collected्कलन गरिएको छ संकलन भन्दा गाह्रो छ। यदि स collecting्कलन गरिएको भन्दा बढी सजिलो छ भने, एकले 'शिकार' को कुरा गर्दछ।
अनावश्यक जे बढेकोमा एकीकृत हुँदैन। अनावश्यक तरललाई यसको प्रसारको समयमा थाहा थिएन। जहाँबाट अति बृद्धि हुने धनी हुन सक्दछ, यसले कहिलेकाहिँ अनुदान दिन्छ, अनावश्यक कुनै चीजको लागि बेकार मात्र हो, तर यसले जीवित पदार्थलाई यसको थप विकासमा पनि बाधा पुर्‍याउँछ। अनावश्यक फोहोर मात्र फोहोर हो।
ह्युगोसँग क्वार्क छ। उसको क्वार्क भनेको यो हो कि उसको स्क्रिनमा क्वार्कले उनलाई चिन्तित बनाएको छ। कि ह्यूगो पागल ड्राइव। दशकौंसम्म ह्युगोको अनुहारमा त्रुटि थियो। लगातार ऐनाको अगाडि उभिएर, उनले आफ्नो क्वार्कलाई हेरे जबसम्म उनका त्वचा विशेषज्ञले लम्प टाढा नराख्ने गर्थे। ह्युगोसँग क्विर्कहरू छन्। तर केवल व्यक्तिगत quirks संग। यदि सबै त्रुटिपूर्ण छ, जस्तै एक पूर्ण स्क्र्याच विन्डो फलक, Hugo आपत्ति छैन। ह्युगोसँग वास्तवमै क्वार्क छ।
खाली विचारले उसको सुकिएको स्नोवुम्यानलाई खुवाउँदछ। खैरो हिउँ महिलालाई न्यूरोसिस भनिन्छ। उनी पूर्ण हानिरहित छिन्, उनी वुडी एलन थिइन। तपाईं एक न्यूरोसिसको बारेमा हाँस्न सक्नुहुनेछ किनभने अजीब मानिसहरू हास्यपूर्ण व्यक्तिहरू हुन्। तर पुरानो हिउँ वास्तवमा त्यस्तो कुनै हानिकारक हुँदैन। हिउँ महिलामा त्यहाँ कुनै रगत बगिरहेको छैन, तर हिजो हिउँ उनीमा बोरिंग छ। पुरानो हिउँ मनोचिकित्सामा जान्छ। यस्तो थेरापी न्यूरोसिस पनि हो, यो नयाँ हिउँ जस्तो सेतो हो।
कुकुर र बिराला जोडी थेरापीमा जान्छन्। थेरापिस्ट एक हीना हो। कुकुर र बिरालो उनीहरूको सम्बन्ध बचाउन चाहन्छन्। थेरापी असफल हुन्छ। किन? त्यो के हुन सक्छ? निश्चित रूपमा थेरापिष्टको साथ, तिनीहरू सबै आफैंमा समस्या छ।
चेपलिन उनको लाशको कम्पनी राख्न हाँस्नको लागि तहखानेमा जान्छन्। उसले पैसा पाउनको लागि धेरै मानिसलाई मारेको थियो। यस संसार र महिलाको दु: खसँग झुक्नु हुँदैन। चेपलिन भनिन्छ हाँसो केन्द्रहरूको अपवाद बाहेक जर्मनीभर हाँसोमा सामान्य प्रतिबन्धको वकालत गर्दछ, जहाँ मानिसहरूले हास्य शुल्क तिर्दा ठूलो स्वरले हाँस्न सक्दछन्।
हाँसो उसको ओठसँग खुशी छ। गम्भीर हाँसो हाँसोको फिटमा परिणत हुन्छ। पूँजीपति वर्गको सोफाबाट हास्यमय हाँसो उठ्न सक्दैन। वास्तविक हास्य हास्यास्पद छैन, यो मात्र खुशी छ। केवल बाध्यकारी क्र्याक दुखको रूखबाट चुटकुले।
इस्ल्डे: डेटलेफ, तपाईसँग तपाई कहिले पनि जान्नुहुन्न कि तपाई ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईं गम्भीर हुनुहुन्छ।
डेटलेफ: यो धेरै सरल छ: यदि म रमाईलो छु, म म गम्भीर छु, र यदि म गम्भीर छु भने, यो केवल मजाक गर्दैछ।
इस्ल्डे: म कसरी अर्को कुरा छुट्याउन सक्छु?
डेटलेफ: पहिलेको केस पनि दिनहरूमा हुन्छ र पछिल्लो मामला अनौंठो दिनमा हुन्छ। वा यो अर्को तिर थियो? म पूरै दुविधामा छु।
Isolde: म त्यो मान्छे संग पागल छु!
मिस डा। Kackebart-Struller: Man Otto! के तपाइँ ओजोन तहलाई के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? हरेक शान्तिमय गन्धसँग, केवल तपाईंको गधा मात्र बढ्दैन, तर ओजोन प्वाल पनि। प्रत्येक पादसँग मिथेनले वायुमण्डलमा खन्याउँदछ, जसले पृथ्वीलाई तताउँछ। नफर्काउनुहोस्! हामीले आफ्नो वातावरण बचाउनु पर्छ!
ओट्टो Struller: तपाईं सही हुनुहुन्छ, माउसी, एकदम ठीक छ। म अब अटारीमा जाँदैछु, ढुकुरहरू खुवाऊ।
जंगली ज forest्गलमा रूखका जराले तिनीहरूको माटो छोड्छ र देशभरि दौडिन्छ। शान्ति फर्कदैन, तर उनी एक रोमाञ्चक यात्रामा गइन्। यो पहाडहरू माथि जान्छ, यो उपत्यकामा जान्छ। कहिलेकाँही उनी जम्प पनि गर्छिन्।
रोलिंग वा सर्कलिंग यसको केन्द्रको वरिपरि एक गोल हो। पा wheel्ग्राको रोलिंगमा फसेको छ। रोल आफै रोल हुँदैन, यो यसको केन्द्रको सम्बन्धमा स्थिर रहन्छ। यदि रोल सर्कलबाट वर्गमा सर्ने हो भने, यो सर्न स्वतन्त्र हुनेछ। बाइकले केवल नोटिस गर्दछ कि ल्यान्डस्केप यो बितेको छ, बाइक आफैं रोकिन्छ।
आराम र व्यायाम
बाकी तिनीहरूको पहिचानको मजा लिन्छ। बाध्यकारी बाह्य आन्दोलनको अभावको रूपमा कसैले शान्तलाई परिभाषित गर्न सक्दछ। त्यसो भए डिस्कोमा त्यहाँ आराम छैन। अटोबानमा पनि होइन। भित्रबाट आराम सहित सम्भवता सम्भव छ। अस्तित्वमा आराम छ। त्यहाँ जेन बौद्ध धर्मको बाध्यकारी शान्तता पनि छ। यस्तो शान्त पृथ्वीमा खेती गरिएको मृत्यु हो, यो दमन र कथन को विनाश मा आधारित छ। वास्तविक शान्त, तथापि, स्वतन्त्रता मा बाँच्छ।
हमिंगबर्ड एक रमाईलो दरबारमा उडन्छ जहाँ व्यक्ति स्पिन गर्दछ। Crown२ मुकुटविहीन व्यक्ति दरबारमा बस्छन्। कुनै पनि होइन र सबैजना एकै समयमा राजा र मूर्ख छन्। दरबारमा मानिसहरु सबै हर्मेफ्रोडाइट्स हुन्। तपाईं आफैंले यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि तपाईंलाई यो लाग्छ। तर तिनीहरू खेल संसार डिजाइन गर्नमा अधिक रुचि राख्छन्: तिनीहरू चाफिंग गर्दैछन्। स्पूलि serious गम्भीर जुवा हो। तपाईं यहाँ जोोजोस राजाहरूसँगै कूल गर्दै हुनुहुन्छ। मूर्खहरूको रूपमा, राजाहरूले आफ्ना मुकुटहरू फोहरा मुनिको ठूलो हलमा राखे। मुकुटले हमिंगबर्डहरूको लागि गुँडको रूपमा काम गर्दछ। किंग क्रिमसन गम्भीर बकवास लेख्छन्। तपाईं त्यस्तो मानिससँग कुरा गर्न सक्नुहुन्न।
कामको यसको कुनै मानिसको भूमिमा पसीना बग्छ, जो थकाउने हो, किनकि रीढ़को सट्टामा, कामको प्रशंसाको स्तन हुन्छ, घमण्डले सुशोभित छ। तिनीहरूको पूर्तिले हृदयघातको काम गर्छ। काम गर्नेहरूले चाँडै आफ्नो लास तहखाने मा भुल्न सक्छ। छुटकाराको लागि काम गर्दछ, तर यसले स्वीकार गर्दैन। काम अन्धो छ, यसले काम गरिरहेको देख्दैन, यो मात्र थाहा छ। उद्धारकको रूपमा ख्रीष्ट लामो समयदेखि बाहिरिनुभयो। मानिस आफैंलाई कामको माध्यमबाट छुटकारा दिन्छ: मनोचिकित्सामा तपाई आफैंमा काम गर्नुहुन्छ।
साँचो आन्दोलन भित्र छ। एउटा घोडा आफैमा बढ्छ, तर कार यसको ईन्जिनको अश्वशक्तिले प्रबल हुन्छ। आन्दोलन एउटा नागिन फेसनमा सार्न जान्छ, तरंगहरूमा। हिड्ने, पौंडी खेल्ने, उडान वा ड्राइभि,, यी सबै चाल हो। आजकल एक मुख्यतया वरिपरि घुम्छ। एक पनि त्यहाँ सर्न सक्छ। तर कसैले पनि यसलाई लिन सक्दैन। तपाईं साइट मा रहनुहुन्छ।
हावाले फ्रिगको अनुहार ख्याल राख्दछ। समय सिमा सकिदै छ। पानी प्वालमा हराउँछ। सबै चालु छ, यो भागिरहेको छ। पेशाब चल्छ, आँसु बग्छ। कोही पनि फ्रिगसँग छैनन्, केवल हावाबाट। तिम्रो खुट्टा बाक्लो जुत्ताले ढाकिएको छ। के भने ऊ ना bare्गो खुट्टा हिंडे भने? तब हावाले उनलाई माथि बोक्दछ र फ्रिग स्वतन्त्र हुन्छ। उनको भारी जूता उनको विगतको बोझ हो। वाहना भनिने एक हावा उसको कपालबाट उड्न थाल्छ। आठ खुट्टे घोडा, स्लीपनिर फ्रिगा पछिल्लो पटक ग्लाइड। फ्रिग्गा मोहित भइन्, उनी हावाको देवतामा घोडामा हाल्न सकिन्छ र एकदम दृढतापूर्वक, न bare्गुटुटै, बाहिर बोक्न सकिन्छ।
शुद्धतम मेसिनद्वारा गरिन्छ। एउटा मेशिनले केही पनि महसुस गर्दैन, त्यसैले यसले निराश हतासको काम गर्दछ। उनी सुस्त कामदारहरूले पुरानो दिनमा गर्नुहुने सबै हात चालहरू गर्छिन्। भावना वा जीवन बिना नै ह्यान्डलहरू, केवल मेकानिक्स, अर्थ बिना आन्दोलन, केवल उद्देश्य। यो कति राम्रो हुन्छ जब एक मेसिनले मूर्ख काम गर्छ। तर मेशिनका सिर्जनाकर्ताहरूले एक पटक आफैंमा मूर्खता रोपे। मेशिनहरू उनीहरूको मूर्खताको साथ बाहिरबाट हामीलाई निरंकुश गर्न जारी राख्नेछन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता छुट्याइएको छ, तर यो मूर्ख छ। हामी आफैंमा महान् विश्व मेशिनमा केवल एक कुग छौं।
मालिकले आफ्ना हातहरू उसको आफ्नै भन्छन्। उसको हातमा परमाणु मालिकको होईन। उसको हातको परमाणु मात्र egoण मा आफ्नो अहंकार को आकार को लागी उपयुक्त छन्। मालिकको मृत्यु पछि, उसको हातको अघिल्लो परमाणु एक फरक उपस्थितिको लागि उपयुक्त छ। मालिक आफ्नो हात मा घर मा महसुस, ऊ आफ्नो हातमा जरा छ। त्यो मूल उहाँको पहिचान हो। यो आफ्नै हात होइन।
स्याउ र पल्प एप्पलमा सँगै बस्छन्। दुबै विवाहित हो? स्याउमा सँगै बढि धेरै जीवनहरू: गोलाकार, हरियो, फलफूल, यसको रूखमा झुण्डिएर। स्याउ सोच्छ: 'मसँग गुणहरू छन्, तर म आफ्नै गुणहरू होइन। यदि मैले आफैंलाई हेरेँ भने, मैले सम्पत्तीहरू मात्र पाउँछु, तर अस्तित्वमा छैन। '' स्याउ क्रोधित हुन्छ यो आत्म-ज्ञानमा: '' सबै मूर्ख! म पनि अवस्थित छैन! '' स्याउको हरेक विशेषता अब आफ्नै तरिकाले जान्छ। गोलाकार उत्तरमा जान्छ, दक्षिणमा हरियो। पश्चिममा फलफूल, र पूर्वमा स्याउको पर्दा। यो अब स्याउ छैन, यो कहिल्यै थिएन। स्याउले यसको नक्कली पहिचान सम्बन्धविच्छेद गरेको छ।उसलाई भर्खरै मलाई उहाँसँगै फ्याकियो। स्याउको ताजगी कहाँ छ? उनी पबमा बस्छिन् र आफैमा भाग्न दिनुहोस्!
कविता भनेको अर्थलाई केन्द्रित पार्नु हो। यद्यपि लेखकहरूको कविता कहिलेकाहीँ यत्तिकै छाप लगाईन्छ कि पाठकले अर्थको बाकस खोल्न सक्दैनन्। लेखकले कविताको सामग्री बुझ्छन् जब उनी लेख्छन्। र लेखकका लागि पनि, उसको भोलिपल्ट बिहान एकदम तंग छ।
पारदर्शिता लुक्ने बिना स्पष्ट स्पष्ट चारै तिर उडेर। प्वालहरू प्रायः पारदर्शी हुन्छन्। यद्यपि पारदर्शी तौल लिन सक्दछ, तर यसलाई मार्फत हेर्न सजिलो छैन। पारदर्शी पारदर्शी हुन्छ जब यो मोटा हुन्छ।
क्याचिंग सफलताको साथ मोबाइलमा यसको शिकारमा पुग्छ। त्यसकारण, मुख्य रूपमा माछा विशेष बन्धनमा आउँछ। तिनीहरू निसरपी छन् र पानीको पानीमा बाँचिरहेका छन्, तर अझै पनि समात्न सकिन्छ।
अपराध केवल यसको लागि लायक छ यदि तपाईं समात्नुहुन्न। एक बंदर चिडियाखानामा आउँदछ यदि यसले केहि गलत गरेको छैन भने पनि। चिडियाखाना जनावरहरूको लागि प्रजाति उपयुक्त जेल हो। केही जंगली जनावरहरू सर्कसमा कैदमा छन्। बच्चाहरू तिनीहरूका अभिभावकको शिक्षाको जेलमा बस्छन्। पत्नीहरू आफ्नो पतिमा आर्थिक निर्भरताको जेलमा छन्।
गोप्य कुराले अर्कोको आँखा देख्दैन। यो एक्लो बस्दछ (वा षड्यन्त्रकर्ताहरूसँग) यसको बन्करमा र सम्भवतः त्यहाँ निम्न कार्य गर्दछ: यो बोट लाग्दछ, यो फेसन गर्दछ, खुशी हुन्छ, टेढो चीजहरू बदल्छ, यसले प्रज्वलित गर्छ, यसले अरूलाई प्रज्वलित गर्छ, यसले तपाईंलाई हाँस्छ, डराउँछ, यो आफैंको सुरक्षा गर्दछ, अस्वीकार गर्दछ, वा यसको बच्चा छ। रहस्य: हामीलाई थाहा छैन कि यसले के गरिरहेको छ। त्यो गोप्य रहन्छ।
विशालताको समुद्रमा पैता बिना उडान ग्लाइडहरू। उडानमा, माथि र तल एक अर्काको विरुद्ध खेल्छन्। संसारलाई नलगाईकन चराको शक्ति हुन्छ। यो प्रतिभा हो। Toadstools, तथापि, उड्न सक्दैन, तिनीहरूको पखेटा जादू गरिएको छ। चराहरूको पखेटा साहसी मा फैलन्छ। उनीहरू घरमा छन्। पखेटा उडानको हतियार हुन्, ती बलको बनेका छन्। एउटा चरा मिडेरमा बिरालोसँग नजोडी स्वतन्त्र उडान गर्न सक्छ। एक कर्मचारी, तथापि, चाँडै आफ्नो मालिक संग या जीवनको गम्भीरता संग टकराउँदछ।
हल्का पज्जल नट्समा सजिलै उड्दछ, यो केवल भारी बेलीहरू पार गर्दछ। प्रकाश माथि फेला पर्दछ। काठ पानीमा तैरन्छ किनभने यो पानी भन्दा हल्का छ। तातो हवाको बेलुन पृथ्वीदेखि निलो आकाशमा तैरिरहेको छ। सजिलो चीजहरू चाँडै लापरवाह बन्छ। यो मूर्ख कुरा सजिलैसँग हुन्छ।
एक हिमपात सावधानीपूर्वक खस्छ। उनी शान्त छिन्। फ्लेक अर्को संसारबाट आउँदछ। यसले यस संसारलाई संरचना दिन्छ, अन्यथा सबै चुम्बकीय क्षेत्रहरू पतन हुनेछन्। उत्तर र दक्षिण ध्रुवहरूमा, चुम्बकीय क्षेत्र हिउँमा खस्छ। पृथ्वीको ध्रुवहरूबाट हिउँले संसारमा गोप्य परिवर्तनहरूको आयोजन गर्दछ। यसको चुम्बकत्वले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई घुसाउँछ र तिनीहरूलाई भारी नागरिक बनाउँछ।
यस्तो सुरक्षा राम्रो चीज हो। संरक्षण तपाईंलाई आवश्यक पर्ने पहिलो चीज हो: संविधानको संरक्षण, हलको संरक्षण, कीटनाशक, डाटा संरक्षण र विचारहरूको संरक्षण। तपाईको दिमाग को संरक्षण बाट एक यात्रा छैन? यो आउँदैछ, पर्खनुहोस् र हेर्नुहोस्।
डाइजेस्ट च्यु र च्यु र च्यू। डाइजेस्टि che राम्रो र राम्रो जुलाउँछ जब सम्म खाना यति राम्रो हुँदैन कि यो तपाईंको आफ्नै मासुमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। यद्यपि खाना सधैं अलि विषाक्त नै रहन्छ। पृथ्वी विषाक्त छ। यो हाम्रो घर होइन। जनावरहरू मानिससँग भन्दा राम्रोसँग पचाउन सक्छन्, तिनीहरू पृथ्वीको नजिक बस्छन्।
हामी जे खडा छौं त्यसलाई पृथ्वी भनिन्छ। कहिलेकाँही यसलाई माटो पनि भनिन्छ। खडा र पृथ्वी दृढ छन्। पृथ्वीको अर्थ ह्युमस वा ढु stone्गा पनि हुन सक्छ। के पृथ्वी को बारे मा विशेष गरी आश्चर्यजनक छ त्यो पदार्थ हो, यो बाक्लो र भारी छ। जमीन शान्तिमय छ, जमीन बेवकूफ छ। महान् महान आमाको अनुहार छैन। उनीसँग न्यानोपन छ? जरा पृथ्वीमा पुग्छ, तिनीहरू पनि पृथ्वी बुझ्न। जरा पृथ्वीको बाँकी भाग संग एक हो।
माहुरीहरू भित्री रूपमा पदार्थको बाक्लो ठाउँमा बस्छन्। चिसो बाहिर चिसो छ बाहिर जान्छ। यो स्नोफ्लेकको रूपमा भूमिमा मृत हुन्छ। माहुरीले आफ्नो भित्रीपन चिसो फ्लेक्सको रूपमा जारी गरेको छ। जबसम्म हिउँ फ्लेक स्थिर छ, यो ट्री रूखको समय हो। यदि फ्लेक पग्लन्छ, एकाकीपन ना naked्गो हुन्छ। अमृतको चुह्रोमा माहुरीहरूले संसारको सबै भागहरू जोड्दछ र गुरुत्वाकर्षणलाई सुदृढ पार्दछ, तिनीहरूले गुरुत्वाकर्षणको शक्तिलाई चबाउँदछन्। अमृत ​​एउटा किताब थियो जुन पढिएको थिएन। यसको लेखकबाट पनि होईन।
भारी यसको मात्रामा सामान्यतया ठूलो हुन्छ। नेतृत्व मा, तथापि, गुरुत्वाकर्षण सानो छ। गुरुत्वाकर्षण बलियो हुन्छ। यसको प्रभाव यसको मासको माध्यमबाट मात्र हुन्छ, यसको रंगको माध्यमबाट भने होइन किनभने भारी रंगीबेरो हुन अलि धेरै गाढा छ। गाह्रो कुरा बुझ्न सक्दैन कि के हास्यास्पद छ। चिनीमा केवल रमाईलो र भारी निन्द्रा। के गुरुत्वाकर्षण माथि वा तलबाट आउँछ? जब तातो ठोस हुन्छ, यो गुरुत्वाकर्षण हुन्छ। कसरी ढु the्गा को बारे मा कि रोल गर्न सकिदैन? यो धेरै भारी वा धेरै तंग छ? ऊ एकदम क्रूर छ! भारी क्रूर भन्दा नरम छ। के त्यसो गर्न सजिलो छ? यो जस्तो छ!
रूखहरू र घरहरू माथि हावा बहन्छ। हावाको शक्ति देखिँदैन, केवल यसको प्रभावहरू देख्न सकिन्छ। हावाले अवस्थित हावालाई उडाउँछ। एक dandelion हावा मा उड्ने, र एशले पनि। हावा धेरै क्षणिक छ। तर यो सँधै वारइ रहन्छ।
सम्पत्ति अद्वितीय छ। उनी उसको कुरा हो। मात्रा सापेक्ष छ; यो सँधै तुलना द्वारा मापन गरिएको छ। लूतको कुनै मालिक छैन। आइस्ल्डको ठूलो पेट छ, तर बोसो उनीसँग सम्बन्धित छैन। अनावश्यक रूपमा सबै थोक प्रशस्त छ। आइन्स्टाइनको दिमागमा कतिवटा क्र्याकहरू थिए त्यसले फरक पार्दैन। यो मस्तिष्कको सम्पत्ति हो कि यसलाई यसको आफ्नै बनाउँछ, यसको दरारहरूको संख्या होइन। तपाईं स्याउ र नाशपाती तुलना गर्न सक्नुहुन्न, केवल तिनीहरूको वजन।
ढु the्गाको टुक्राहरूलाई बालुवा भनिन्छ। बालुवा स्पिलिटरहरू यति सानो हुन्छ कि पृथकको समुदायको रूपमा उनीहरू फेरि इकाई बनाउँछन्। बालुवा पूरै अनुभूति हुन्छ। सबै कुरा डरलाग्दो छ, तर बालुवा रोक्न सक्दैन किनकि यो एकदम सुक्खा छ। ढुones्गाको रगत र पानी हुँदैन, बालुवाको जस्तो पनि छैन। दु: खी राक्षसहरूको आँसु समुद्र जस्तो नुन पानी दान गर्दछ। यसैले बालुवा प्राय: समुद्र तटको रूपमा फेला पारिन्छ जहाँ समुद्र छ।
मानिसहरू केवल बहुवचनमा अवस्थित छन्। एक व्यक्ति एक्लो हुन सक्दैन। बथान पशुको रूपमा मानिस "मानिस" हुन्छ। भीड मान्छे मिलेर बनेको हुन्छ। मान्छे को रगत आफ्नो Kin रगत छ। अर्कोतर्फ, एक व्यक्तिको आफ्नै रक्तप्रवाह हुन्छ। पुरातन यहूदीहरूको सम्बन्धमा, अब्राहमको रगत उसको ढिलोसम्म बग्दछ। व्यक्ति र पुरातन व्यक्तिको समूहमा उनीहरूको पहिचान हुन्छ, आफैमा होइन।
बेबिलोन बच्चा थिएन: यो सब भन्दा ठूलोको लागि ठूलो थियो। न्यूयोर्कमा गगनचुम्बी भवनहरू पनि छन्। तर यी आतंककारीहरूले नष्ट गर्नुपर्दछ किनकि उनीहरू भगवानलाई खरोंच गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू सुनको बाछा, आर्थिक बृद्धि र कस्मेटिक सर्जन वरपर नाच गर्छन्। कहिले अन्तमा परमेश्वरको क्रोध आउँछ र पापी मानिसहरूलाई रद्दीटोकरीमा हाल्नेछ?
फ्रेडले राति जेनेभा नजिकै ठूलो कण एक्सिलरेटरमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्‍यो र अब गोलो घण्टीमा घुम्न गइरहेको छ: उनले हल्का हरियो कणहरू उसको वरिपरि उडिरहेको देखे।
फ्रेड: हेलो कणहरु, के तपाई पनि बोल्न सक्नुहुन्छ?
हरियो कण: मेरो टाउको दुखाइ छ, त्यो नराम्रो छ किनकि म मात्र एक टाउको मिलेर बनेको छु। भौतिकशास्त्रीहरूले मलाई पत्ता लगाए पछि म अबदेखि संसारलाई राम्रोसँग बुन्न सक्दिन। राजनीति पनि नियन्त्रण बाहिर सर्पिल छ।
रातो कण भूतपूर्व उडन्छ: यसले फ्रेडको जिब्रो निकाल्छ जुन कणको भन्दा पनि रातो हुन्छ।
रातो कण: म पैसाको गधा अन्तर्गत आगो राख्दै छु सामान्यतया पैसा भनेको सूचना मात्र हुन्छ। मेरो आगोले सूचनालाई मूल्य दिन्छ। एक त्रिकोण द्वारा उडेर, यसको निधारमा एक आँखा छ।
त्रिकोण: म त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो कण हुँ। साँच्चै सानो कणहरू मात्र भौतिकीको नरकमा अवस्थित छन्। सानोको कुनै वास्तविकता हुँदैन। फराकिलो चीजहरू हुन्छन्, तिनीहरू त्यति नै वास्तविक हुन्छन्। - फ्रेड मात्र चकित छ।
अराजकता एक भ्रम हो जुन रचनात्मक अन्य विश्वका मानिसहरूले प्रयोग गरेर दिमाग सुरक्षाद्वारा अनावश्यक दुनियामा प्रवेश गर्छन्। अराजकता रंगीन छ। अराजकताले विगतको रद्दीटोकरी हटाउँछ। अराजकता नृत्य गर्दछ र के को लागी थाहा छैन।
लेख्दा, भाषा आवाजमा चुपचाप बोल्छ, तर चेतनामा चम्किलो हुन्छ। Scribes निश्चितता को मूर्तिकारहरु छन्। लेख्नु जहिले पनि केहि लेखिएको हुन्छ, लेख्दा पनि। के लेखिएको छ अन्तिम हो र राम्रो मदिरा भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। शब्द सबै समय को लागी लेख्छ।
नाच साहसी छ। नृत्य गर्ने जो कोही पागल छ। तर नृत्य पनि शान्त हुन सक्छ जब तपाईं एक लापरवाह व्यक्ति हुनुहुन्छ। विचारकहरूले नाच्नु हुँदैन। नृत्यले तिनीहरूको मानसिक स्पष्टता बिग्रन्छ। मायालु खानाको अभावका लागि हताश, बाघले पागलपनले खराबको खराब क्रम खान्छ: मिठो किट्टीले खाना बनाउँछ!
आँसुको थोपा आकाशबाट खस्छन्। तिनीहरू पृथ्वीमा भेला हुन्छन् एउटा खोला बनाउन जुन खोलामा फुल्छ। एरविन आँसुको प्रवाहको माध्यमबाट डुoe्गामा प्याडलिंग गर्दै छन्। नदी माथिबाट बग्छ। वोटानको सम्मानमा नदीको दाहिने किनारमा आगो लाग्यो। देब्रेपट्टि रूख छ जसमा ढु a्गाको चरा राखिएको थियो। एरविनले डु in्गामा माथि उकालो चढ्ने काम जारी राख्यो। अब हिउँ परिरहेको छ। क्यानोइस्टले पातको सुईहरूको बीचको किनारमा हिममान्छी देख्दछन्। हिममानवका आँखाहरू जीवित छन्, ती शक्तिशाली टेडी भालुका आँखाहरू हुन्। इरविन नदीमा प्याड्लि। गर्दै छन्। बाँयामा, कसैले वीणा बजाइरहेको छ। भगवान नजिक हुनुहुन्छ।
रंगीन स्पिलिटरसहित कालो महिला एउटी रमाईलोसँग पिइरहेकी छिन्। तिनीहरू ताराहरू माथि, ताराहरू मुनि, ताराहरू बीच उडान गर्दछन्। टाइटानिकको जीवन यसको डूब्यो। फोल्डि paper पेपर डु cas्गा प्रायः पानीमा तैरन्छ, होशियारीपूर्वक दलदलको पानीको झरनातिर बग्दै: ब्या Bang्ग! खरानी माथिबाट खस्छन्। Eyjafjallajökull अन्ततः फुटिएको छ।
फिट आफूलाई प्रेमको रूपमा यसको विपरितमा फेला पार्दछ। सम्बन्धितको रूपमा, फिटिंगले पूरक एक र अर्को समान सेवा मार्फत। सबै कुरा एक संरचना मा एक साथ फिट। बियर, सिगरेट र एस्ट्रियाहरू श्री अल्की भान्साको टेबलमा छन्। त्यो अर्थमा बनाउँदछ, त्यो फिट छ। श्री Alki भान्से तालिका एक संरचना हो। इन्टरनेटमा, हिन्ज र कुन्ज एक साथ संसारको ठूलो क्याटलगमा छन्। हिन्ज र कुन्जहरू केवल आफ्नो अस्तित्व मार्फत जोडिएका छन्। इन्टरनेट कपडा होइन, तर बकवास हो।
एउटा चीज यसको अस्तित्वमा खैरो छ; यो, अरू केहि छैन। कुरा व्यक्तित्वगत हो। चीजहरूको अनुहार रहित विश्व मेसिनले पृथ्वीलाई नियम दिन्छ: चीजहरूको इन्टरनेट। चीजहरू संसारको चीजहरू बनाउँदछ। शैतानले लामो समयदेखि संसारलाई आफ्नो पञ्जामा पार्दै आएको छ। जीवित प्राणीहरु को मामला मा एक कुरा को कुरा छैन किनकि उनीहरु आफैलाई सार्न। तर एक युवा चीज आफैमा सार्न सकिन्छ। त्यो एक चीज हो।
एक उपाय सही हुन सक्छ, मित्रैला देवताहरू द्वारा मायाले बेक गरिएको। एक शिक्षकको रूपमा, बिरामी उपायले विद्यार्थीको नाकको अगाडि शक्ति बाहिर सीमित गर्दछ। विद्यार्थीको लागि नाप त पूर्ण हुन्छ, उसको जीवन सulates्कलन हुन्छ, र उद्योगले बाँधबाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ।
यी सबै पूर्णता को सीमा मा धेरै चीजहरूको एक थप हो। के यो सबै पूरै हो? सम्पूर्ण कुरा कम्तिमा राम्रोसँग गोलाकार छ। अपेक्षित रूपमा, सम्पूर्ण चीज यसको किनारमा चम्किनुपर्दछ, तर त्यहाँ खैरो रहन्छ। त्यसोभए औद्योगिक पादरी बोल्छ: “पूरै भाग यसको भागको योग भन्दा बढी हो!” यो वाक्य पछि पनि सबै कुरा चम्किंदैन, केही पनि देखिन सकिंदैन। सम्पूर्णमा सबै थोकको कवच थप रहन्छ। यस पुस्तकमा त्यहाँ अझै धेरै कुरा छन्।
कुनै पनि चीज सबै गैर-चीजहरूको संसार हो। एक कप एक गैर-कुर्सी हो। पोशाक गैर-क्लाउड हो। कुकुरलाई उल्लेख गर्नुपर्दैन: कुकुर मात्र भ्यागुरो जस्तो एक गैर बिरालो हो। सबै गैर-चीज कुनै चीजको दुनिया मा सँगै आउँछ। कोही भन्छन् मरे पछि त्यहाँ केहि छैन। के तपाईं त्यहाँ सबै थोरै कुरामा बाँच्न चाहनुहुन्छ? यो केहि को भण्डारण कोठा मा धेरै तंग हुनेछ।
रमाइलो गर्न आवश्यक भन्दा बढी आवश्यक छ। त्यसैले आनन्द खुशी संग सम्बन्धित छ। तर जहाँ आनन्द जीवनको उपहार हो, रमाईलो मनपराइन्छन्। मजा लिनेर र रहन्छ। चिल्लो आनन्द यसको आनंद प्राप्त गर्दछ। खुशी खुशी हो कि पार भयो। रमाईलो लाग्दैन, यसको लागि रमाइलो पनि ढिलो छ। यदि आन्द्राले आवश्यकता भन्दा बढी पचाए भने, यो खुसी हुन्छ। सन्तुष्टि मीठो छ, तर चिनी खुशी हो।
Während aber das Glück ein Geschenk des Lebens ist, so genießt Genuss ganz willkürlich.